Qaar kamida xanuunada xiniin yaha
Sababaha keena Xanuunada xaniin yaha ama qooraha ragga waxaa ka mida wax yaabaha soo socda oo ay ka mid ka yihiin:
1: infection ama caabuq ku dhaca xiniin yaha ama qanjirka prostate ka loo yaqaano iyo sidoo kale infection ama caabuq ku dhaca xarigga epididyms ka loo yaqaano.
2: Dhaawac ama jug hore oo ku dhacday xiniin yaha.
3: in qofka uu ku dhaco cudurka sababa Bararidda xididda qooraha ee "Varicocele" ka loo yaqaano
kaas oo sababaya burtuq
burtuqyo qooraha darbigiisa ku
sameysma siiba dhinaca bidix da.
4: cudurka Sheelada "Hydrocele" waxey keeneysaa barar sida in xiniin yaha biyo ku jiraan oo kale.
5: Marjiska xaniinyaha "Testicular torsion" wuxuu sababi karaa barar uu la socdo xanuun saaid ah.
6: Eernada qooraha waa barar uu la socdo xanuun mar mar ah laakiin yaraan kara ama dib u noqon kara marka aad jiifato.
1: Bararka mar mar ma yaraadaa mararka qaar kood na ma baaba'aa?
2: Marka aad qofaceyso ama aad wax culus qaadeyso bararka ma kordhaa?
3: Haddii aad jiifsato bararka ma
4: Bararka ma wax ka soocan xaniin yaha baa oo aad gacanta ku qaban karto?
5: Xanuunka aad daremeyso goor ma ayuu bilawday mise bararka ayey wada socdeen oo hal mar ayey bilowdeen?
6: Bararka ma sii kordhayaa mise waa sidii uu ku bilowday?
haddaba jawaabaha su,aalahan ayaa ah kuwo si rasmi ah u kala cadeyn doona nooca uu yahay cudurka sababaya xanuun ka iyo bararka xiniin yaha ragga soo wajaha iyadoo dhibaatadan noqotay maal mahan mid in badan lagu arko qaar kamida dadkeena iyadoona ay ugu wacan tahay in cudurada keena xanuunada la xiriira xiniin yaha iyo guud ahaan xubnaha taran ka ragga aad u kordheen.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 4:17 PM
Waa maxay howl gabka kacsiga ee loo yaqaano impotence
Dhibaatada dareen la aanta kacsiga,
loona yaqaan howl gabka kacsiga wuxuu
ku yimaadaa 5 - 10 % nin ee da'da 40 ka
gaara. Da'duna si kala duwan ayay ugu
korortaa, sidaasi ayaa 5 ka mid ah 10 kii
nin ee 70 jir ah ba la kulmaan heerar kala duwan ee cudurkaan. Dhibaatada
howl gabka kacsigu inta badan waa
dhibaato siyaabo kala duwan ku
timaada da, kastana waa ku imaan
kartaa. Dhibaatada Cudurkaan waxaa ka
mid ah ragga kacsadaa bilowga hordhaca galmada, hase yeeshee aan sii wadi karin kacsigii iyagoo waaya waqti ku filan oo ay ku galmoodaan. Kacsigu wuxuu ku bilowdaa isaga oo ku xiran dareen kacsi, markii ay xididada yar
yarka ah ee xubinta galmada ninka ay fiddo soona galaan qulqul dhiig ah
xubintaasi. Xubinta galmada ninka waa
ay weynaataa, laakiin haddii ay xididada dhiiggu ay dhiigga ka saaraan xubintaasi, way soo uruurtaa, markii ay xubintaasi kacdana waa ay weynaataa waana dheeraataa. Cudurkaan howl gabka kacsigu wuxuu ku yimaadaa iyada oo ay qulqulka dhiiggu soo gaarin ama uusan joog toobin, kadibna aad is aragto inaadan kacsan karin ama muddo yar kaliya kacsato. Inta badan xaaladaha cudurkan waxaa sabab u ah cudurro jirka ku dhaca. Da'du shardi uma aha iney keento cudurkan howl gabka kacsiga. Xernaanshaha xididada dhiiggu waxay hoos u dhigtaa inuu dhiiggu aado xubinta galmada ragga. Cudurkaan howl gabka kacsiga wuxuu caadi ahaan ku yimaadaa cudurradaan dadka qaba.
1: kaadi macaanka,
2: wadna xanuunka,
3: dhiig karka
4: cudurada neerfaha 5: iyo ragga qalliin lagaga sameeyay
qanjirka prostate ka.
6: isticmaalka Kiniiniga jirka biyaha ka
7: iyo daawooyin ka loo qaato dhiig
karka, kuwa suuxdinta, daawooyinka buufiska ama buuqa loo isticmaalo
(anxiolytics) waxay keeni karaan cudurka howl gabka kacsiga.
Cudurkaan ama xaaladaan howl gabka
kacsiga ragga sidoo kale waxaa keeni
karaan xanuuno badan waxaana ka mida cudurada iyo xanuunada keeni kara.
Oo isagu ah cudurka ugu weyn uguna wax yeeleynta badan xubnaha taranka ragga iyo dumarka.
2: cudurka infection ka Cudurkaan oo isagana ah cudur wejiyo
badan leh isla markaana si yaabo kala
duwan ku yimaada ayna sababi karaan
cudur keeenayaal badan oo kala duwan.
3: isha sixirka iyo jinka oo iyaguna
sababa xanuuno badan oo banii aadamka la soo darsa 3 dan cudur sababayaasha ah ayaa iyaguna sababi kara dhibaato la xiriirta howl gabka kacsiga oo waliba joogto noqon kara kuwani ayaa sababi kara xanuuno iyo cillado badan oo la xiriira xubnaha taran ka rag iyo dumarba xanuuno la xiriira dhimirka kuwo la xiriira nafsada iyo dhibaatooyin kale oo aad u badan inshaa allaah waxaan ku falan qeyn doonaa maqaal gaar ah oo
arrintaan ku saabsan sidoo kale howl
gabka kacsiga ragga waxaa sababi karaan xaaladaha la xiriira murugta
badan fikirka badan Dhafarta badan ee habeenkii in badan in qofka soo jeedo.
Sidoo kale waxaa howl gabka kacsiga
sababi karaan nafaqo darida in qofka la soo daristo xaalad macluul ah,
khal khal ku yimaada habka shaqo ee
hormoonada ninka, hoos u dhac ku
yimaada qaar kamida vitamins ka jirka
aasaasiga u ah.
Sidoo kale waxaa jirta xaalado kale oo sababi karaan howl gabka kacsiga ragga
Waxaana kamida adeegsiga farsamo
khaldan tusaale in qofka sameeyo in
muddo ah in uu (siigeysto) waa fal ninka
biyaha shahwada gacantiisa isaga
keenayo waana fal in badan sababi kara xanuuno badan howl gabka kacsigana
kaalin weyn ayey kaga jirtaa.
Sidoo kale waxaa kamida sigaar cabista
cunista qaadka iyo dhamaan
mukhaadaraadka guud ahaan waa
asbaabaha keena howl gabka kacsiga. Howl gabka kacsiga ragga waa suurtagal in ay la socdaan cudurro xaalado iyo cillado kale sida biya baxa deg dega ah shahwo yari dhalmo la aan iyo guud ahaan xanuuno kale sida dhabar xanuun kilyo xanuun calool fadhi iyo dhibaatooyin kale oo badan.
Sidoo kale waxaa dhici karta in howl
gabka kacsiga ragga xaalado kale la
socon taa soo ah in qofka dareemo howl
gabka kacsiga laakiin caafimaad kiisa
kalena uu fiican yahay. Haddaba haddii aad ka cabaneyso dhibaatooyin la xiriira xagga jinsiga rag iyo dumar ba sida howl gabka kacsiga tabar yarida raganima biya baxa deg dega dhibaatooyinka la xiriira shahwada
sida shahwo yarida yaraanta noolayaasha shahwada ku jira dhibaatooyinka la xiriira xagga taranka sida dhalmo la aanta dhiciska joogtada ah ama dhibaatooyin kaasi ay hayaan qof kamida ehelkaada asxaabtaada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daaweyn rasmi ah caawimaad buuxda talooyin inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 4:12 PM
QAAB NOOCEE AYAAD ULA DHAQANTAA NADAAFADA IYO QURXINTA JIRKAAGA SIIBA WAJIGA
Sidaynu ognahay wajiga banii aadamka wuu ka jilicsan yahay jirka intiisa kale haba ugu horeeyaan dumarka, waayo wajiga wa jir markasta wax la mariyo siiba dumarka, haddaba waxaa jirta in wajigu qaato jeermiska iyo wasakh da ugu badan kuwaas oo ka soo raaca gacmaha iyo hawada Tusaale ahaan sida caadada inoo ah Soomaalida siiba dumarku waxay ku meyrtaan wajiga saabuun ama (shower Gel) kadib qofka waxa uu u heystaa in ay intaa kaga dhamaatay meyristii wajiga haddii qofka waqtiga uu qubeysanayo uu na meyrayo jirkiisa oo dhan ee uu ka soo baxayo baafka uu sameeyo si uu u ogaado wasakhada iyo jeermis ka wajigiisa ku harsan waa in uu soo qaato suuf (cotton pads) wuxuu ku shubayaa biyo yar oo milix leh, ama liin dhanaan wuxuuna ku xoqayaa wajiga waxuu arkayaa suufkii oo noqday yeeshay midabka bunniga kana tagay cadaankii waxaasina waa (dead dirty skin cells) oo ay la socdaan wasakh iyo jeermi. Had iyo jeer waxaa aad u haboon in marka aad wajiga taabaneyso dumar iyo rag ba marka hore waa in aad gacmaha si wanaagsan isaga meyrto oo aad qallajisaa waayo gacmaha waxaa la socda oo ay sitaan jeermiska ugu badan ee aan la qiyaasi Karin, marka waxaa caafimaad ahaan qof kasta u fiican in markasta gacmaha la hor dhaqo intaan wajiga la taaban. Jeermis (germs) waa noola yaal cayayaan ilma aragto ah inta badana la socda wasakhda kuwaas oo haddii ay jirkaaga qabsadaan taabtaan kugu sababi kara cudurro kala duwan iyo xitaa dhalan rog ku dhaca muuqaalka maqaar kaaga wajigu na kamid yahay. Tusaale kale oo aad u muhiim ah cilmi baaris lagu sameeyay (mobile phone) ka gacanta ayaa waxa lagu ogaaday inuu ka jeermis badan yahay jeermiska suuliga laga qaado, waayo waxaa soo raaca kuna uruura jeermis aan xad lahayn ama aan la qiyaasi karin jeermigaa oo uu ka helo gacmaha banii aadamka waxaa nasiib darro weyn ah in aad ku aragto dadka qaarkiisa soomaalida na ay ku jirto iyagoo mobile phone ka ay isticmaalaan afka galiya arrin kaas oo sabab u noqon karto in qofka sidaa sameeya ay ku dhacaan cudurro badan. waxaan inshaa allaah mid mid u kala qaadeynaa qeybaha uu ka kooban yahay jirka ama maqaarka banii aadamka si dadkeena soomaalida wax badan uga ogaadaan caafimaadka jirkooda. Waxaana maanta ka hadleynaa inshaa allaah. 1: jirka ama maqaarka iskugu jira labada nooc ee loo yaqaano(combination skin) 2: Iyo Burooyinka ku dhaca Wajiga Iyo Qoorta ee loo yaqaano (blackheads or black dots). inshaa allaah waxaan ku hormareynaa Burooyinka waxa ay had iyo jeer ku dhacaan jirka saliida badan leh, runtii jirkan ama maqaar kan ayaa caan ku ah waxyaabo badan oo Burooyin ku ka mid yihiin inay ka soo baxaan waa haddii ay daldalooladiisu xirmaan Burooyinkan waxa ay ku dhacaan ama ka soo baxaan. 1: sanka dushiisa, 2: dhabanada dhinacyada sare, 3: fooda, 4: qoorta 5: dhabarka. Burooyinkan waxaa ay ka soo dhashaan halka loo yaqaano (hair follicle) oo ah meesha ay timaha xaadu ka soo baxaan, jirka ama maqaarka saliida leh ayaa sii daaya saliid iyo dhidid aad u tiro badan ka dibna jeermis noqda, kuna soo uruura meesha xaadu ka soo baxdo Intaa kadib jirka ama maqaarka hoostiisa meesha loo yaqaan (hair follicle) waa halka ay xaadu ka soo baxdo ayaa midab keedu wuxuu noqdaa madoow, muddo kaddibna waxaa dibada uga soo booda burooyin yar yar, sababta ayaana ah uskagii iyo dhididkii ku uruuray daldaloolada maqaarka oo hawada ka xirmatay. jirkan ama maqaarka noocan ah iyo guud ahaan ba jirka saliida leh ayaa ah mid markasta u bahan nadiifin iyo qalajin loo isticmaalayo wax yaabo saliidu ku yartahay Burooyinka noocan ayaa ah kuwo faafa jirku wuxuu intiisa kale is gaarsiiya xilliga habeenkii marka uu qofku hurdo ee uu dhidido. marka laga soo tago daaweynta rasmiga dhibaatooyin ka uu sababo jirka noocan ah iyo guud ahaan ba jirka saliida leh waxa kaliya ee la iskaga yarayn karo ama lagaga hor tagi karo ayaa ah jirka qofka oo si rasmi ah loo nadiifiyo loona qallajiyo dadka qaar kiisa siiba dumarka ayaa isticmaalo wax yaabaha loo yaqaano(facial scrub, facial cleanser, and toner) dhamaan wax yaabahan iyo kuwo kale oo loo isticmaalo nadiifinta qurxinta jirka iyo daweyntiisa ayaa haba yaraatee jirka banii aadamka ugu jirin isticmaalkooda wax faaiido ah oo u raageysa iska daa faaiido laga helo bal waxaa ay sababaan in uu hoos u dhaco guud ahaan difaaca jirka gaar ahaan difaaca unugyada maqaarka uu leeyahay jilicsanaan saaid ah oo ku timaada maqaarka iyo cudurro kale sida kansarka maqaarka sababtoo ah qofka waxa uu had iyo goor isticmaalayaa (chemicals) kala duwan isla markaana wada socda. in qofka uu baneeyo daldaloolada jirka (pores) ee xirmay ee jeermiska jirka (dead skin cells ) ee maqaarka galay la dagaalamo waxa ay caawineysaa in qofka uu ka badbaado burooyin ka uu keensado maqaarka noocani ee (combination skin) ka loo yaqaano waxaa kale oo fiican inuu qofku gogosha uu ku seexanayo sida go'a barkimada uu iska badalo usbuucii laba jeer, waayo dhididka uu jirku sii daayo ayaa ku dhaga gogosha waxana uu qeyb weyn ka qaataa in qofka maqaarkiisa ay ku sii fidaan burooyin ka, maqaarka burooyinka leh na arrintaa uma fiicna, Nadaafada badan ee jirka iyo dharkaba waxa ay qofka ka caawisaa in uu ka guuleysto Burooyinka uu sababo maqaarka saliida leh. Burooyinka ayaa ah kuwo si dhib yar u tagaya inshaa allaah haddii si rasmi ah loo qaato daaweynta rasmiga ee ku haboon noocyada kala duwan ee maqaarka u kala sameysan yahay barashada iyo la macaamilka jirka ayaa waxa ay leedahay muhiimad weyn oo xagga caafimaadka ah. hadii uu jirku maqaarku yahay mid dabiici ah oo aan dhib kale gaarin sida haddii aanan loo isticmaalin wax yaabaha jirka la mariyo ee chemicals ka ka sameysan dhaawac ama cudur ku dhacayna uusan jirin jirka ama maqaarka noocaas ah waa dabiici wuxuu u baahan yahay oo kaliya nadaafad xoog leh lana joogteeyo sida meyrashada qallajinta iyo nadaafada gogosha. haddii se jirku yahay jir wax la mariyay ama khafiifay oo burooyin ka soo baxeen, jirka dawooyin ka chemicals ka la mariyay uma adkaysan karo xitaa wax kale iska daayee nafaada caadiga ah oo la joogteeyo maxaa yeelay daawooyin ka dhamaan loo isticmaalo qurxinta jirka waxaa ku jiraan maadooyin chemicals ah kuwaas oo dila unugyada maqaarka sameeya marka haddii jirkaaga uu yahay jir chemicals lagu quudiyo isla markaana uu khafiifay marka hore waxaa haboon in aad wax kasta oo jirka la mariyo ka fogaato sababtoo ah maqaar kaaga waa uu sumeysan yahay wax kasta oo sun taas fal gal la sameyn karana waxa uu noqonayaa wax ku dhibaateeyo. 2: jirka loo yaqaano (combination skin) jirkan ama maqaarkan ayaa ah mid inta badan dadka somalidu aysan aqoon u lahayn, waxaa kaliya oo aan garaneynaa uun 1: jirka ama maqaarka qalaylka, 2: jirka saliida badan, iyo 3: jirka wax diida, jirkan ayaa ah mid aan dhib kiisu badneyn oo u dhow jirka caadiga ah hadii si fiican loola dhaqmo. Jirkan ayaa ah mid had iyo jeer dhabanadu ay noqdaan sida jirka caadiga ah oo kale , ama jirka qalayl ka ah, balse fooda iyo garka waxa ay noqdaan kuwo soo saaro saliid taasoo loo yaqaano (T-zone) waa meelaha saliida soo saarto micna heeduna yahay saliida ku uruurta garka iyo fooda. Meeshan saliidu fadhiisato oo ah garka inta ugu badan ayaa sababta inuu nooca jirkan qofka lihi uu yeesho finan ka soo baxa garka oo kaliya Jirkan ayaa u baahan daaweyn rasmi ah oo hal mar qofka noloshiisa isticmaalayo si uu jirka noocan ah u helo waxa loo yaqaano (Ph balance) muhiimada laga leeyahay daaweynta rasmiga ayaa ah in la dhaqaajiyo saliida si anay dhib kale ugu keenin wajiga qofka jirkiisu noocan yahay. Nooca Jirkan ayaa ah mid ay isku macaamil dhawyihiin jirka saliid leh oo loo wada isticmaali karo daaweynta rasmiga ee nooca jirka saliida leh. marka jirkan maanta aynu ka hadlayno ee ah (combination skin) ayaa ah mid gadhka iyo foodu saliid badan fariisato, sababtaa aw geedna way isku dhawyihiin jirka saliida leh. noocyada jirka ama maqaarka caadiga ah ee uu banii aadamku leeyahay inta da'diisu yar tahay waa kuwa aan kor ku soo xusnay, jirar kale oo badan ayaa jiro kuwaas oo had iyo jeer la socdaan waqtiga iyo cimriga banii aadamka uu marayo iyo is bed bedelka ku dhaca jirka aadanaha waxaana kamida. jirka cimiri deg deggu uu ku dhaco , xilliga gabowga xilliga xanuunka , iyo marka cadceedu jirka qofka disho ee aan la daryeelin. Jirarkan oo iyaguna runtiina ay tahay in la barto in si gaara loola dhaqmo waxaa ka mida: 1: Mature skin — oo ah jirka cimri degdegu uu ku dhaco 2: Dehydrated skin — jirka sida aadka ah u qalalay ama jirka haraadan ee ooman 3: Ageing skin — jirka marka la gaboobo 4: Congested skin — jir xumaday oo daldalooladiisuna xirmeen, finan ku sameysmeen gadhka, ama ahaan jiray markiisii hore (oily skin) inshaa allaah xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa markasta diyaar idiin la ah in aad kaga bogataan luuqadda soomaaliga qodob kasta oo caafimaadka bulshada soomaalida quseeya isla markaana wax weyn ka taraya aqoonta iyo caafimaadka bulshada iyo khatarta caafimaad ee markaa soo food saarta sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa heegan buuxa waxa ay ugu jiraan sidii dadkooda soomaalida ay uga daaweyn lahaayeen cudurrada xanuunada cilladaha iyo mashaakilka kasta oo xagga caafimaadka quseeya oo ay qabaan xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda waxaa ka go'an sidii qof kasta oo soomaali ah uu ku heli lahaa aqoon caafimaad oo hagar la'aan ah daryeel caafimaad oo dhameystiran daaweyn iyo daawooyin rasmi ah tayadooda iyo wax tarkooda la hubo meel kasta oo ay dunida kaga noolyihiin dadka soomaalida waxa ay xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda u diyaariyeen daryeel caafimaad oo dhinac kasta leh sida cilmiyeynta bulshada wacyi galinta bulshada daaweynta cudurrada guud iyo kuwa gaarka ah talasiinta caawinta bulshada dhamaan intaasi iyo ka badan waxaa diyaar idiin la ah xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta ka howl gasha website yadan xarumaha caafimaadka bi idni llaah waan sii wadi doonaa qormadan ku saabsan noocyada jirka ama maqaarka banii aadamka u kala baxo iyo hababka kala duwan ee uu u dhaqmo inshaa allaah waxaana ka bixin doonnaa tafaasiil dheeraad ah si dadkeena soomaalida ay u fahmaan u ogaadaan xaalado badan oo jirkooda uu ku sugan yahay qofka soomaaliga ah na uu u noqdo qof yaqaana nooca jirkiisu uu yahay sida uu u dhaqmo iyo siduu isagu kula dhaqmi lahaa bi idni llaah. xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta ka howl gasha ayaa markasta u taagan daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah xarumaha caafimaadka dhaqaatiir tooda ba waxa ay xoogga saaraan daaweynta iyo xal u helida cudurada bulshada soomaalida siiba cudurada dadka soomaalida ku dhaca kuwa ay iska dhaxlaan kuwa ay isu gudbiyaan iyagoo u diyaariyay daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso cudurka loogu talagaleyna si rasmi ah u daweynayaan bi idni llaah Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaad ka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof ka mida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah oo aad ku heleyso waqti kooban wax tar koodana la hubo inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 2:26 PM
WAA MAXAY CHOLESTEROL CUDURRO IYO XANUUNO SE MA KEENAA
Cholesterol waa dufan jirku uu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo magaca cholesterol waxa uu leeyahay oo uu isugu jiraa 3 eray oo isa saaran waxa ayna kala yihiin sidan soo socota. 1: chole, oo ah (bile) 2: stereos, oo ah (solid) 3: ol, oo ah (alcohol) cholesterol waa hydrocarbon organic molecule.Waxaa lagu sameeyaa beerka waxaana laga helaa cuntada ka timaadda xoolaha, sida hilibka, ukunta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo subagga. Haddii cholesterol fara badan uu jirka ku jiro wuxuu noqon karaa mid waxyeelo gaarsiiya jirkaaga wuxuuna kordhin karaa halista aad ugu jirto in ay kugu dhacaan cudurrada wadnaha siiba waxaad Halis weyn ugu jirtaa in cholesterol ka dhiigaaga ku jira uu sarreeyo haddii: 1: Jirkaagu uu sameeyo cholesterol fara badan 2: haddii aad cunto cunno uu dufanka cayriin iyo cholesterol ka ay ku badan yihiin 3: haddii aad qabto cudurka sonkorowga 4: haddii heerka qanjirka dheecaan ka thyroid ka uu hooseeyo waxaana loo yaqaanaa (hypothyroidism) 5: haddii aad qabto qaar kamida cudurrada kilyaha. Waxaa jiraan 3 nooc oo dufan ah oo dhiiggaaga ku jira: 1:Dufanka Cufkiisu Sarreeyo High Density Lipoproteins waxaana loo soo gaabiyaa (HDL) waxaana loo yaqaanaa cholesterol ka wanaagsan (good cholesterol) faaiidada uu u leeyahay jirkaaga waxa ay tahay wuxuu cholesterol ka dheeraadka ah ee qofka cudurada ku sababa ka qaadaa dhiiggaaga wuxuuna ku celiyaa beerka si markaa jirkaagu uu u awoodo inuu uga takhaluso dufanka dheeraadka ah. 2: Dufanka Cufkiisu Hooseeyo Low Density Lipoproteins waxaa loo soo gaabiyaa (LDL) waxaana loo yaqaana cholesterol ka xun (bad cholesterol) cholesterol kaan xun marka uu dhiiggaaga ku jiro wuxuu ku kordhaa oo uu soo dhex galaa marinnada dhiigga ama xidida dhiiga Tani waxa ay sababi Kartaa ama keeni kartaa in marinnada dhiiggaagu ay ciriiri noqdaan iyadoo caqabad ku noqoneysa socodka dhiigga ama qul qulka dhiiga ee xididada dhexdooda toos u dhax mari lahaa. 3: Triglycerides Cunidda carbohydrate fara badan waxay kordhin kartaa ama sabab u noqon kartaa in jirkaaga uu ku kordho heerka triglyceride taas oo sabab u noqon karta in uu sara maro cholesterol ka xun. Heerarka Dufannada dhiigga waxaa lagu ogaadaa baaritaan dhiigag qofka laga qaado. Natiijooyinka baaritaan ka waxa ay kuu sheegayaan heerka guud ee cholesterol ka dhiiggaaga sida. 1: qofka caafimaad ka qaba xaddiga cholesterol ka dhiigiisa ku jira total ahaan waxaa laga rabaa wixii ka hooseeya. 200 mg/dl ama wixii ka hooseeya 5.2 mmol/L Xadiga kama dambeysta ee cholesterol ka qofka caafimaadka qaba dhiigiisa ku jiri kara waa sidatan. 200 ilaa 239 mg/dl ama 5.2 ilaa 6.2 mmol/L. Xaddiga saaidka ka ah ee cholesterol ka sarreeya dhiiga qofka ku jira waa sidatan. 240 mg/dl ama 6.2 mmol/L iyo wixii ka badan. Xaddiga qofka caafimaadka qaba ee cholesterol ka wanaagsan (HDL) waxaa laga rabaa sidatan. 70 ilaa 60 mg/dl ama 1.6 ilaa 1.8 mmol/L. ka badan 70 ma wanaagsana. Dadka uu jirkooda ku badan yahay cholesterol ka xumi isla markaana qatar weyn ugu jira cudurada wadnaha xaddiga cholesterol ka xun waa sidatan. Wixii ka hooseeya 70 mg/dl ama 1.8 mmol/L waa dadka qatarta weyn ugu jira cudurada wadnaha waxaa laga rabaa in uu noqdo sidatan. 100 ilaa 129 mg/dl ama 2.6 ilaa 3.3 mmol/L. Wuxuu xad ka bax noqdaa oo aad u sara maraa marka uu gaaro heerkan. 190 mg/dl ama 4.9 mmol/L iyo wixii ka sareeya. Cabirka Triglyceres ee qofka caafimaadka qaba waa sidatan. 150 mg/dl ama 1.7 mmol/L iyo wixii ka hooseeya aad ayey u fiican tahay Xaddiga qofka uu dhiigiisa aad ugu badan yahay dufanka noocan waa sidatan. 500 mg/dl ama 5.6 mmol/L (waa very high) Baaritaan ka dhiiga ee cholesterol ka waxaa lagu magacaabaa sidatan. Cholesterol levels Lipid panel ama lipid profile Waxaana loo baaraa qeybahan soo socda. Total cholesterol HDL cholesterol LDL cholesterol Triglycerides Triglycerides waa nooc kamida dufanka waxaasi kordhiya siyaadiya wax yaabaha mac macaanka ah iyo cabista alcohol lada ama khamriga. Sida ugu wanaagsan marka la baarayo cholesterol ka ayaa waxa ay tahay in qofka uusan wax ba cunin 9 saacadood ilaa 12 saacadood wax aanan aheyn biyaha caadiga ma ahee. Hubinta iyo la socodka heerarka kala duwan ee cholesterol ka jirka banii aadam ka sameeyo ayaa waxa ay tahay gaashaan ama difaac adag oo uu qofka xilli hore kaga gaashaamanayo cudurro badan siiba cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididada oo iyagu maalmahan noqday kuwo aad ugu soo batay caalamka gaar ahaan bulshada soomaalida inshaa allaah waxaana jecelnahay inaan dadkeena soomaalida u iftiimino in qabista ama heysashada cudurka dhiig karka iyo in qofka uu la socdo xaaladaha la xiriira cholesterol ka jirkiisa ay kala gaar tahay sababtoo ah qofka marka uu qabo cudurka dhiig karka taasi macnaheeda ma ahan in qofka uu ka hortagayo in ay ku dhacaan cudurada ku dhaca wadnaha sababtoo ah waxaaba ku dhacay cudurka dhiig karka oo isagu waa qof waqti hore ba loo dhacay oo waxaa ku dhacay mid kamida cudurada ka dhasha kororka cholesterol ka xun sidaa aawgeed waxaa laga doonayaa dadka caafimaadka qaba ee da'dooda ay tahay 30 jirka iyo ka weyn ba in ay waqti hore bilaabaan la socodka cholesterol ka jirkooda ku jira iyo hadba kororka uu mid kasta oo kamida 3 da nooc ee dufanka ah ay sameynayaan. Haddii qofka lagu sheego in uu leeyahay jirkiisa xaddi aad u badan oo cholesterol ah ama uu jiro sare u kac nooc kamida noocyada dufanka jirka waa cholesterol ka ee waxaa waajib ah in qofka uu si deg deg ah isaga daaweeyo arrintan waxa ay gacan buuxda qofka ka siineysaa in uu waqti hore sameeyo ka hortag ah in ay yimaadaan cuduro badan oo badan kooda asiiba wadnaha kilyaha maqalka iyo aragga. Xubnaha muhiim ka ah ee wax yeelada uu gaarsiiyo cholesterol ka jirka ku bata waxaa kamida. 1: wadnaha 2: Maskaxda 3: kilyaha 3: sambabada 4:xididada dhiiga Iyo xubno kale oo aad u fara badan. Daaweyn rasmi ah oo jirkaaga ka saareysa guud ahaan cholesterol ka siyaadada ku ah jirkaaga isla markaana jirkaaga siineysa tababar uu si dabiici ah ugu kontaroolo xaddiga cholesterol ka ee jirkaaga uu sameynayo daawooyin kan ayaa jirkaaga u suura galinaya in uu hoos u dhaco kororka siyaadada ee guud ahaan ba cholesterol ka jirkaaga uu sameynayo ama uu ka soo nuugayo cuntooyin ka aad isticmaasho sidoo kale daawooyin ka waxa ay kor u qaadayaan cholesterol wanaagsan sidoo kale waxa ay hoos u dhigayaan cholesterol ka xun ee cudurada sababa daaweynta rasmiga ah sidoo kale waxa ay faaiido weyn u leedahay dadka qaba cudurka dhiig karka noocyadiisa kala duwan marka laga reebo nooca loo yaqaano (secondary hypertension) oo isagu ay sababaan xaaladahan soo socda midkooda. 1: cudurada kilyaha ku dhaca qaarkood sida dhagxaanta kilyaha 2: cudurada ku dhaca halbow layaasha dhiiga ee wadnaha. 3: cudurada ku dhaca wadnaha qaarkooda. 4: cudurada ku dhaca endocrine system ka. 5: xilliga haweenku uurka leeyihiin 6: cudurka sonkorowga Iyo xaalado kale oo badan haddii se sababta ama cudurka sabab u ahaa in uu imaado la daaweeyo qofka waa uu ka bogsoodaa isagoon laga daaweyn. Dhiig karka kale ee isagu ah cudurka dhiig karka ee rasmiga waxaa lagu magacaa baa Essential hypertension ama primary hypertension sababaha keena cudurkan waxaa kamida 1: dhaxal in aad ka dhaxasho qoyskaaga sida hooyo iyo aabe awoow iyo ayeeyo iyo wixii lamida (genetics). 2: isu dheeli tir la'aan xagga cuntada qofka oo aanan cunin cunto isu dheeli tiran (poor diet). 3: qofka oo aanan sameyn jimicsi training (lack of exercise). 4: buurnida, iyo qofka oo yeesha culeys miisaan oo badan (obesity). iyo dhamaan xaaladaha aan kor kaga soo hadalnay oo dhan inshaa allaah waxaad kaga kaaftoomeysaa daaweynta rasmiga ee ay kuu diyaariyeen xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirta ka howl gasha website yadan daawooyin ka waa kuwo qofka si sahal ah u qaadan karo mana laha wax dhibaato (side effects) ah oo ay leeyihiin bi idni llaah na waa kuwo soo afjaraya dhamaan ba xanuunada la xiriira cholesterol ka dhiig karka xeydha buurnida dadka qaba xanuunada la xiriira wadnaha dadka qaba xanuunada la xiriira halbow la yaasha iyo xididada waxaana kuu diyaariyeen isla markaana kugu dabiibaya dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka bi idni llaah. xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa markasta u taagan daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ba waxa ay xoogga saaraan daaweynta iyo xal u helida cudurada bulshada soomaalida siiba cudurada dadka soomaalida ku dhaca kuwa ay iska dhaxlaan kuwa ay isu gudbiyaan iyagoo u diyaariyay daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso cudurka loogu talagaleyna si rasmi ah u daaweynayaan bi idni llaah Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaad ka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof ka mida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah oo aad ku heleyso waqti kooban wax tar koodana la hubo inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 3:56 PM
WAA MAXAY SUMOOBIDDA DHIIGA EE LOO YAQAANO (BLOOD INFECTION)
Blood infection waa caabuqa ku dhaca unugyada dhiiga waxaa kale oo loo yaqaanaa (Sepsis) oo macna heedu yahay dhiigga qofka uu sumoobo kadib markii ay bacteria ka buuxsanto. Sumoobidda dhiigga waxuu ka dhalan karaa bacteria soo weerarto meel kasto oo jirka banii aadamka ka mid ah sida: 1: bacteria da sababta caabuqa mindhicirrada. 2: bacteria da caabuqa Kilyaha iyo kaadi mareenka. 3: bacteria da sababta caabuqa Maskaxda taas oo sababta xaalada lagu magacaabo qoor gooyaha (meningitis). 4: bacteria da sababta caabuqyada Beerka iyo xameetida. 5: bacteria da sababta caabuqyada Sambabada taas oo keento oof wareen (Pneumonia). 6: bacteria da sababta caabuq yada Maqaarka Caruurta. sumoobidda dhiiggu wuxuu ka imaan karaa qaar kamida bacteria da ku dhacdo lafaha. dadka xanuun sanaya qaarkood waxay sumoobidda dhiigga ka qaadi karaan qaar kamida qalabka iyo farsamooyin ka dhaqaatiirta caafimaadku adeeg sadaan sida irbadaha faraha oo iyagu loo adeegsado in badan oo baritaano bukaanada lagu sameynayo . Calaamadaha lagu garto sumoobidda dhiigga waxaa ka mid ah: 1: Cadaadiska dhiigga oo hoos u dhaca arrintan waxaa ka dhalan karta in qofka uu galo xaalad (shock) ah xubanaha ugu muhiimsan jirka sida kilyaha, beerka, sanbabada iyo maskaxda waxa ay jooji nayaan in ay si habsami leh u shaqeeyaan. Calamadaha guud waxaa ka mid ah: 1: Qandho qarqaryo la socoto 2: Wareer iyo calwasaad 3: Kaadida oo yaraato 4: Qandho siyaado ah ama heer kulka oo aad u hooseeyo. 5: Qofka oo neefsigiisu bato 6: Dhidid maadaama cadaadiska dhiigga uu dhacsanyahay 7: Wadno garaac siyaado ah 8: Faruuruc nabro ah oo oogada sare ee jirka ka soo yaaca. 9: cudurkan waxa uu sababi karaa in ay howl gab noqdaan kilyaha oo ay shaqada ka fariistaan. Cudurkaan waa cudur halis ah dadka badanaana way u dhintaan, haddii si dhakhso ah loo daaweynin ama cudurka la garan waayo. Sumoobidda dhiigga waxaa looga hortagi karaa. 1: in qofka nadaafaddiisa guud uu ilaaliyo, 2: hadduu xanuun iska dareemana in uu la xiriiro dhaqaatiirta si markaa loo ogaado cudurkiisa loona daaweeyo. Cudurkan ayaa isagu ah cudur beryahan dambe dadka soomaalida aad ugu soo batay wixii ka dambeeyay sanadkii 2002 ilaa waqtigan sababta ugu weyn ayaana waxa ay tahay in dadka soomaalida ay yihiin dad xanuun ka la soo darsa aysan hore isaga daaweyn ilaa qofka uu gaaro heer uu wax qabsan waayo sida aan kor ku soo xusnayna cudurkan ayaa qofka ugu dhici kara ama ugu soo gudbi kara qaab sahlan isagoona ah cudur qeybo badan oo jirka banii aadamka kamida dhiiga uga gudbi kara sida. 1: maskaxda. 2: sambabada. 3: kilyaha iyo kaadi mareenka. 4: caloosha iyo guud ahaan ba dheefshiidka. 5: maqaarka. Sidoo kale waxaa iyadana muhiim ah in la fahmo in xubna haasi sida ay u kala duwan yihiin iyaga shaqadooda na u kala duwan tahay in haddana wada shaqeyn iyo wax wada qeybsi weyn uu ka dhaxeeyo sababtoo ah dhamaantood waxa ay ka mideysan yihiin sidii ay uga shaqeyn lahaayeen habsami u socodka iyo bad qabka guud ahaan ba jirka oo dhan sidaa aawgeed haddii markaa ay jirto xubin kamida jirkaaga oo xanuun saneysa isla markaana uu qabsaday dagay cudur markaa waxaa jirta in fursadda xubin taas jiran ay cudurka hayya ama mid kaleba ugu gudbiso unugyada jirka sida dhiiga ay gaari karto 75% marka waxaa muhiim ah in qofka banii aadamka uu dadaalo 3 dan waqti ee kala ah. 1: inta uusan cudurka imaanin qofkana uu caafimaad qabo waa in uu ka hortagaa wax kasta oo caafimaadka qofka wax u dhimi kara. 2: marka cudurka qofka ku dhaco ama uu dareemo in uu xanuun san yahay waa in uu si deg deg ah u ogaadaa cudurkiisa iyo xanuun kiisa waxa uu yahay daaweyn iyo dadaal na uu galo xilli hore inta cudurku uusan fidin ama uusan baabi'inin xubnaha muhiim ka ah. 3: marka cudurka la ogaado loona helo xal daaweyn rasmi ah in qofka uu naftiisa uga faaiideeyo fursadda daaweynta ee waqtigaa uu heysto inta daaweyntu cudurka la dagaalameyso guulna keeneyso haddii se sidaa la yeelin waxaa suura gal ah in cudurka uu adkeysi u yeesho daaweyntu taasi oo keeneysa in daawada cudurka aysan waxba ka qaban cudurkiina waxa uu noqonayaa mid sii jira faafa kuwo kale ay ka dhex dhashaan taasi oo inta badan lagu arko bukaanada qaarkood in hal cudur oo asiibay ay sii dhex dhashaan ilaa 8 cudur ama 8 xaaladood oo kala gaar ah. Cudurkan inshaa allaah waxa uu leeyahay daaweyn rasmi ah oo loo qaadanayo bi idni llaah 2 bilood oo xiriirta ah daaweyn taas oo qofka ka sifeyneysa sunta dhiiga ee ay sababaan dhamaan ba cudur sababa yaasha bacteria, da parasite, ka fungus, ka oo iyagu ah kuwa ugu badan ee sababa sumoobidda dhiiga cudur sababaha virus ka loo yaqaano isagu waa looga badan yahay sababidda cudurkaan daaweynta 2 da bilood ee cudurkan waxa ay soo ajrareysaa dhamaan ba cudurka oo ah sumoobidda dhiiga iyo cudurka iyo xaaladaha kale ee markii hore ba sababta u aheyd in uu yimaado daaweyn taas rasmiga ah waxaa idiin diyaarisay xarumaha daraasaadka caafimaadka iyo dhaqaatiirta ka howl gasha xarumaha caafimaadka ee website yadan oo iyagu ah ilaha kaliya ee daaweyn iyo daawooyin rasmi ah dadka soomaalida u fidiyaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan. waxaa aad u haboon in dad keena soomaalida ee xanuun sanaya ay ku dadaalaan sidii ay caafimaad kooda u xaqiijin lahaayeen inta aysan gaarin xiliyada aan banii aadamka waxba loo qaban karin. xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa markasta u taagan daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ba waxa ay xoogga saaraan daaweynta iyo xal u helida cudurada bulshada soomaalida siiba cudurada dadka soomaalida ku dhaca kuwa ay iska dhaxlaan kuwa ay isu gudbiyaan iyagoo u diyaariyay daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso cudurka loogu talagaleyna si rasmi ah u daaweynayaan bi idni llaah: Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaad ka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof ka mida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah oo aad ku heleyso waqti kooban wax tarkoodana la hubo inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 7:34 AM
WAA MAXAY CAABUQ AMA INFECTION SIIBA CAABUQYADA AMA INFECTION NADA KU DHACA XUBNAHA TARANKA DUMARKA IYO RAGGA mid kamida cudurada ku dhaca xubinka taranka haweenka isla markaana ah kan ugu weyn ee dumarka dunida gaar ahaan dumarka soomaalida ku keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka oo aad u badan siiba dhibaatooyin ka la xiriira dhinac yada taranka waa dhalmada iyo xagga qashin saarka jirka sida kaadida saxarada iyo caadada sidoo kale isla qodob kaan waxaa soo galaya dhididka oo isaguna kamid ah mid kamida qashin saarada jirka uu leeyahay oo aad u muhiim ah cudurkaan oo isagu ah mid saameynaya dhamaan 3 daas qeybood ee qashin saarada jirka leeyahay ayaa haddana dhibaatadiisa intaa oo kaliya aysan ku koobneyn waayo cudurkaan waa mid saameyn weyn ku yeesha habka taranka guud ahaan banii aadamka rag iyo dumarba gaar ahaan dumarka waxa uu ku leeyahay saameyn aad u badan sidoo kale cudurkaan waxa uu saameeyaa oo uu xumeeyaa macaamilka ka dhaxeeya ninka iyo xaaskiisa isagoo qoyska ka dhex abuura mashaakil hoosaad xagga nolosha iyo gogosha intaba waana cudur qofka marka uu ku dhaco ku keena mashquul dhinaca nafsada ah waana cudur faafa isla markaana aan ku koobnaaneyn qofka uu haleelo oo kaliya waxa uu saameyn karaa labada qof ee isqaba iyo ubadkooda intaba waa cudur qoysaska ku bixiyaan qarashaad fara badan bil kasta sanad kasta. Su'aasha ayaa waxa ay tahay Waa maxay cudurkani?. Cudurkani waxaa lagu magacaabaa caabuq ama (infection) waa maxay caabuq ama (infection) caabuq ama infection waa waxyeeleynta ama ficil waxyeelo loo geysanayo mid ama ka badan unugyada jirka waa hab cudur loogu beerayo unugyada jirka ee caafimaad qaba, caabuq ama infection waa cudureynta xubin ama xubno caafimaad qaba oo jirka kamida oo la waxyeeleynayo cudur iyo bushi lagu beerayo taasi waa taas waxaa iyadana xusid mudan in cudur sababe kasta sida bacteria, da virus, ka parasite, ka iyo fungi, ga ba kuwaas oo iyagu ah kuwa mas'uul ka ah inta badan in cudur imaado dhamaantood ba waxa ay wax ku waxyeeleyaan oo ay cudur ku keenaan waa caabuq ama infection ay ku beeraan xubnaha caafimaad ka qaba ee ay asiibaan isla markaana ay ku tarmaan iyagoo ka nuugaya qofka wixii nafaqooyin ah ee ay u baahan yihiin si ay u tarmaan si kooban cudur kasta waxa uu ku dagaalamo ee uu wax ku waxyeeleeyo waa caabuq ama infection hadba sidii aad u taqaano cudur dhaliye kasta waxa uu geystaa waxyeelo isagoo adeegsanaya wax yeelana ku geysanaya rasaasta lagu maga caabo caabuq ama infection. Sababta fasiraada dheer aan uga bixinay ereyga caabuq ama infection ayaa waxa ay tahay in dadkeena soomaalida si dhab ah u fahmaan macnaha caafimaad ee ereygaan waayo waxaan in badan aragnay dad badan oo soomaali ah oo leh dhaqtar kasta oo aad u tagto waxa uu ku leeyahay waxaa ku haya infection ama waxaad arkeysaa dadkeena qaar kamida oo u yaqaana infection ka ama caabuqa infection ka ku dhaca kilyaha iyo kaadi mareenka ee loo yaqaano (urinary tract infection) kaliya.waxaa iyadana xusid mudan in ay jiraan xaalado iyo cuduro kale oo kooban kuwaas oo caabuq ama infection la'aan waxyeelo geysan kara isla markaana khatar weyn gelin kara nolosha banii aadamka balse ma aha xaalado iyo cuduro aad u badan iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana xitaa kuwaa iyaga ah marwalbo kama marnaanayo caabuqa oo ugu dambeynta waa mid imaanaya sidoo kale waxaa xusid mudan in dhamaan noola yaasha banii aadam ka uu marti geliyo sida qaar kamida bacteria da iyo fungi ga parasite ka dhamaantood isku mid ma aha oo dhamaantood dadka ma waxyeeleeyaan qaar badan ayaa banii aadamka manaafacaad u leh in ay la noolaadaan balse kuwa waxyeelada iyo caabuqa sababa ayaa waxaa lagu magacaabaa pathogen ama (infectious agent). Qodobka aan dooneyno in aan bulshada soomaaliyeed u iftiimino ayaa waxa uu yahay. Caabuqa ama infection ka ku dhaca xubinka taranka haweenka ee loo yaqaano (vaginal infection) . vaginal infection ama caabuqa ku dhaca xubinka taranka haweenka waa caabuqa ugu badan ee dumarka asiiba waqti kamida noloshooda waana cudur caan ku ah in uu soo noq noqdo waxaana sabab u ah in dumarka cudurkaan saaxiib la noqdo asbaabo badan waxaana kamida. 1: isu gudbin in dumarka marka la guursado cudurkani uga soo gudbo seygeeda sidoo kale gabadha waxa ay u gudbin kartaa seygeeda sidoo kale waxaa xusid mudan in ninkana u sii gudbin karo haddii uu leeyahay xaasas kale. 2: isku dhalid haddii cudurkani ay qabaan labada waalid ilmaha ay dhalayaan waa uu u gudbi karaa haddii aan laga hortagin. 3: aqoon dari la xiriirta xagga macaamilka gogosha ama galmada arrintan oo ah iyadana mid labada is qaba u horseedi karto in uu haleelo noocyo kamida caabuqyada xubnaha taranka. 4: qofka oo qaba xanuuno ama cuduro kale oo sababa in jirka caabuq ku dhasho isla markaana ku fido xubno badan oo jirka kamida xubnaha taranka iyo kilyaha iyo kaadi mareenka ayaa iyagu ah kuwa ugu horeeya ee caabuqyada ku fidaan cuduradaasi waxaa kamida cudurka gaaska iyo bacteria da sababta boogaha gaaska caloosha ee loo yaqaano H.pylori qaar kamida gooryaanada waxyeelada geysta caabuqyada ku dhaca quumanka ee tonsilitis ka loo yaqaano cudurada ku dhaca kilyaha cudurka qaaxada iyo dhamaan ba cudurada sababa hoos u dhaca difaaca jirka banii aadamka. 5: nadaafad xumo guud oo la xiriirta nadaafada xubnaha taranka siiba dumarka sida in dumarka xirtaan nigisyo hoos gashiyo aan nadiif aheyn ama muddo dheer la sito hal hoos gashi ama hoos gashiyada naylon ka ka sameysan oo xirashadooda caado laga dhigto waayo hoos gashiyada ka sameysan naylon ka waxa ay sababaan noocyo kamida caabuqyada ku dhaca xubnaha taranka dumarka. 6: qodobka aadka isagana muhiim ka u ah waa dumarka qaarkood ayaa isticmaala sameeya in dhowr kii beriba ay dhaqaan xubinka taranka iyagoo isticmaalaya saabuuno iyo shaambooyin iyo wax yaabo udug leh oo markaa loogu talagalay iyagoona dumarka u maleynaya in ay faaiido weyn leedahay qaab nadaafadeed kaas balse waa musiibada ugu weyn ee heysata dumar fara badan (vaginal douching) oo ah dhaqista xubinka taranka haweenka (farjiga) ayaa waxa uu sababaa caabuqyada kala ah (yeast infection) iyo bacterial vaginosis) kuwaas oo dumarka ku keena caqabado iyo xanuuno la xiriira xagga taranka iyo kaadi mareenka sidoo kale waxa uu sababaa in dumarka ay ilmaha uga beermaan meelo ka baxsan gudaha ilmo galeenka ama riximka (ectopic pregnancy) dhaqista xubinka taranka waxa ay sababtaa in labada nooc ee bacteria da ah ee ku nool gudaha farjiga dumarka kuwaas oo kala ah bacteria da fiican ee cudurada ka celisa dadka iyo bacteria da xun ee dadka cudurada ku keenta oo iyagu si siman ugu wada nool gudaha farjiga in qiyaasta ka lunto oo bacteria da fiican dhimato ileyn saabuun biyo shaambo ayaa lagu dhaqayaaye bacteria da xumina kororto ziyaado sidaana ku keento cudurada caabuqa leh ee aan kor ku soo sheegnay sidoo kale waxaa uu sababi karaa falkaan cuduro badan oo dumarka kaga dhaca xubnaha taranka kilyaha iyo kaadi mareenka. Calaamadaha la arko marka xubinka
taranka haweenka cudur hayo waxaa ka mid ah: 1: Xubinka taranka haweenka oo
cuncunta, 2: gubasho xubinka dhexdeeda ah,
3: xanuun iyo dhacaan ka yimaado xubinka taranka haweenka, waana sababaha ugu badan ee haweenka u raadiyaan in ay la tacaalaan xubinka taranka, waana arrinta inta badan keenta cuduro ku dhaca xubinka taranka haweenka iyo caabuqyada keena xanuunadaas. Haweenka jooga da’da uurka lagu qaado ama xiliga ugu horeyso ee uu ku dhaco dhiiga caadada, waxaa inta badan u keenaa dhibatadan nooca caabuq dhaliye ee loo yaqaano (bacterial infection) calaamada ugu caansan waxaa kamida . 1: dhacaan urta kalluunka oo kale leh oo ka yimaada farjiga laakin haweenka qaarkood ayaan laheyn. 2: dhabar xanuun 3: xanuun xiliga galmada iyo kadib. 4: cun cun iyo gubasho xubinka taranka gudihiisa 5: dhacaan mar mar uu qasan dhiig ka hor iyo kadib xiliga caadada. Hadaba waxaa looga baahan yahay
dumarka in ay ku dadaalaan nadafaada xubinka taranka si ay uga badbaadaan cudura daas
kuwaas oo u keeni kara dumarka in ay xitaa dhib kala kulmaan in ay uur yeeshaan ama dhicis ku yimaado.
Sidoo kale dumarka waxaa looga baahan yahay in ay isticmaalaan hoos gashi ama kastuumooyin kasmeysan dun oo aysan isticmaalin kastuumoyinka ka sameysan Nylon-ka ama polyester-ka kuwaasi waxay xadidaan hawadii fareeshka aheyd ee gali laheed meeshaas iyo tii ka soo
bixi laheed waxayna inta badan keenaan huur iyo cun cun badan taas oo sahasho inuu meeshaas ka dhasho fungus oo horseed u noqdo inuu dumarka ku dhaco caabuq ama infection. Hadaba waa maxay calaamadaha ay dumarka isku arkaan markuu jiro caabuq ama infection. 1: Cun cun xubinka taranka ah 2: Kaadida oo gubta dumarka marka ay kaadi nayaan.
3: Galmada oo dhib iyo xanuun lagala kulmo. 4: ur Xubinka taranka ah 5: Xanuun dhinaca gumaarka ah ilaa qaarka hoose ee dhabarka 6: Caajis badan. xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiir tooda ayaa markasta u taagan daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah ba daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso: Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaad ka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof ka mida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawi maad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 12:04 PM
MA OGTAHAY WAXTARKA VITAMINS YADA? Inshaa allaah walaalayaal waxaan mar kale sii wadeynaa hanaanka iyo doorka ay vitamins yadu ku leeyihiin jirka banii aadamka iyo jiritaan kiisa intaba waxaana inshaa allaah ku bileynaa qaar kamida vitamins yada aasaasiga u ah nolosha banii aadamka annagoo ku dadaali doona inshaa allaah in dadkeena soomaaliyeed si qoto dheer u fahmaan. Vitamiin A. Waxa uu u fiican yahay ama uu ziyaadiyaa Aragga, ama aragtida korriimada caruurta , dhadhanka in qofka si rasmi ah wax u dhadhamiyo dareenka dhadhanka ayuu kor u qaadaa waxa uu qofka u furaa cuntada (appetite ka) Calaamadaha lagu garto qof ka uu jirkiisa ku yaryahay vitamin A Waxaa kamida. 1: Aragtida habeenka oo xumaata qofka oo aan habeenkii si fiican aan wax u arki karin. 2: caabuqyo ama infections joogta ah oo qofka ka asiiba neef mareen ka siiba caruurta (respiratory infections) 3: gaas ama boog calooleed oo qofka kaga sameysanto caloosha (gastroentiritis) 4: daahitaan ama dib u dhac ku yimaado koriimada cauurta iyo koriimada lafaha. 5: khal khal ku yimaado hanaanka taranka qofka rag iyo dumar ba. 6: dumarka waxa uu ku keeni karaa haddii jirkooda uu ku yar yahay vitamin A dhicis joogta ah. Inta qofku maalintii u baahan yahay waa 800 micrograms (mcg) Cuntooyin ka laga helo vitamin A waxaa kamid ah. 1: Beerka, 2: karootada, 3: khudaarta caleenta cagaaran, 4: ukunta qeybta huruuda ama jaalaha ah, 5: caanaha iyo wixii laga sameeyo, 6: khudaarta huruuda ama jaalaha ah. Haweenka uurka leh ama qorsheynaya in ay uur yeeshaan waa in aysan isticmaalin vitamin A wuxuu dhib gaarsiin karaa ilmaha uurka ku jira. vitamiin B6 (pyridoxine) waxa uu u fiican yahay Maqaarka, neerfayaasha, dheefshiidka. Calaamadaha lagu garto qofka uu ku yar yahay jirkiisa waxaa kamida. 1: Cudurada maqaarka. 2: cudurada dhiiga ku dhaca qaarkood waxaa kamida anemia da loo yaqaano (megaloblastic anemia) 3: wuxuu sababi karaa noocyo kamida waalida. 4: gaas ama bog calooleed. Inta qofku maalintii u baahan yahay waa 2 (mg ) dumarka qaata daawooyin ka xakameynta uurka waxa ay u baahan yihiin ka badan 2 mg. Cutnooyinka laga helo vitamin b6 waxaa kamida. 1: Kaluunka, 2: mooska, 3: digaaga vitamiin B12 (cobalamin) waxa uu u fiican yahay Samaysanka dhiiga iyo neerfa yaasha. Calaamadaha lagu garto qofka uu jirkiisa ku yar yahay 1: Daal 2: caajis, 3: xato-xato 4: kabuubyo gacanta ama cagaha ah, 5: xasuusta oo lunta hilmaan badan 6: dhiig la’aan. Inta qofku maalintii u baahan yahay waa 1 (mcg ) Cuntooyinka laga helo waxaa kamida 1: hilibka, 2: ukunta, 3:digaaga, 4: beerka, 5: kaluunka shellfish, 6: caanaha. Fitamiin C (ascorbic acid) waxa uu u fiican yahay Difaaca jirka, la dagaalan ka cudur sababa yaasha bacteria da virus ka, bogsiinta boogaha nabaraha iyo dhaawac yada , la dagaalanka dufanka dhiiga (cholesterol ka) oo hoos u dhacda wuxuuna aad u xoojiyaa hanaanka difaaca jirka iyo shaqooyin kiisa waxa uu na ka qeyb qaataa bogsiinta cuduro fara badan. Calaamadaha lagu garto qofka uu jirkiisa ku yar yahay vitamin c waxaa kamida. 1: Daal, 2: dhiig ka yimaada ciridka 3:bogsashada nabaraha & dhaawac yada oo daaha. Inta qofku maalintii u baahan yahay 60 mg. Cuntooyinka laga helo Liinta, yaanyada, bataatiga, khudaarta caleenta cagaaran. vitamiin D waxa uu u fiican yahay Lafaha iyo ilkaha koriimada lafaha iyo dhismahooda. Calaamadaha lagu garto qofka uu ku yar yahay 1: Lafaha oo daciif noqda 2: ilko aan caafimaad qabin. Inta qofku maalintii u baahan yahay 5 mcg. Cuntooyinka laga helo 1: Qoraxda, 2: kaluunka sardiin ka loo yaqaano, Iyo kan kale ee salmoonka, nooca kale ee tuunada, 3: caanaha iyo wax yaabaha caanaha laga sameeyo. vitamiin E (tocopherol) waxa uu u fiican yahay La dagaalanka sumaha ama sun yaasha iyo qashinka jirku soo daayo. Calaamadaha lagu garto qofka uu jirkiisa ku yar yahay 1: Murqo daciif murqaha oo daciif noqda. 2: dhibaatooyin badan oo la xiriira xagga dhalmada weynta vitamin kaan waxa ay sababi karyaa Ma dhalaysnimo. Inta qofku maalintii u baahan yahay 10mg. Cutnooyinka laga helo 1: Saliida dhirta laga sameeyo, 2:ukunta, 3: khudaarta ay ka mid ka yihiin broccoli, 4: spinach cuntooyinka laga sameeyay badarka buunshadooda wata. Folic Acid (Folic acid) waxa uu u fiican yahay Samaysanka dhiiga cas. Waa lama huraan in ay dumarka qaataan sadexda bilood ee ugu horaysa uurka si looga hortago in jirka cunugu si qaldan u koro isla markaana ku dhasho cuduro. Calaamadaha lagu garto qofka jirkiisa uu ku yar yahay (folic acid) 1:anemia dhiig la'aan. 2: daal fara badan. Inta qofku maalintii u baahan yahay 200 mcg. Haweenka uurka leh waa in ay qaataan 400mcg maalintii ba, ilaa 12 isbuuc. Cuntooyinka laga helo folic acid waxaa ka mida 1:Karootada, 2: beerka, 3: ukunta qeybta huruuda ama jaalaha ah, 4: melon ka, 5: digirta 6: khudaarta caleenta cagaaran. Kaalsiyam (Calcium) waxa ay u fiican tahay Lafaha iyo ilkaha neerfa yaasha, murqaha iyo xinjiraha joojiya dhiig baxa Calaamadaha lagu garto qofka ay jirkiisa ku yartahay, 1: Ilko xanuun iyo bur bur ilkaha ku dhaca lafaha oo daciif noqda. Inta qofku maalintii u baahan yahay 800 (mg) Cuntooyinka laga helo calcium waxaa ka mida. 1: Caanaha iyo wixii laga sameeyo, 2: khudaarta caleenta cagaaran Feerada ama (Iron) ta waxa ay u fiican tahay Dhiiga cas iyo kan cad intaba, shaqada murqaha iyo difaaca jirka guud ahaan Calaamadaha lagu garto qofka jirkiisa ay ku yartahay (iron) ta waxaa kamida. 1: Daal iyo si fudud u xanaaqid 2: feejignaan la’aan dareenka feejig naanta oo hoos u dhac ku yimaado. Inta qofku maalintii u baahan yahay 14 (mg). Cuntooyinka laga helo 1: Hilibka cas ama kuduudan, 2: kaluunka saliida leh, 3: ukunta qeybta huruuda ama jaalaha ah, 4: khudaarta caleemaha cagaaran Magnesium Waxa uu u fiican yahay ka qayb-qaadashada samaysanka energy ga ama tamarta jirku u baahan yahay iyo dayac tirka unugyada jirka, dhisida lafaha, ilkaha iyo murqo awood leh iyo wiliba nidaaminta heer kulka jirka. Calaamadaha lagu garto qofka uu jirkiisa ku yar yahay 1: murqaha oo kuduuta, 2: wadno xanuun, 3: cudurka sonkorowga , 4: cudurka dhiig karka 5: lafaha oo daciif noqda. Inta qofku maalintii u baahan yahay 300 (mg ) Cuntooyinka laga helo 1: Khudaarta caleemaha cagaaran. Zinc Waxa uu u fiican yahay Difaaca jirka iyo dheef shiidka nafaqada jirku u baahan yahay. Calaamadaha lagu garto qofka uu ku yar yahay jirkiisa. 1: Nabaro saameeya maqaarka, indhaha iyo dhuunta, 2: lumida dareenka dhadhanka iyo urka, 3: timaha oo goo go’ sameeya, 4:shuban, 5: dhaawaca oo daaha inuu biskoodo 6: iyo dhibaatooyin koriinka caruurta la xiriira. Inta qofku maalintii u baahan yahay 15mg. Cuntooyinka laga helo 1: Hilibka, 2: kaluunka shellfish, 3: caanaha. Isticmaalka vitamins yada ayaa marka loo eego caafimaad ahaan waxa ay nolosha banii aadamka kaga jiraan kaalin weyn oo aad u muhiim waxaad na arkeysaa in ay saameyn badan ku leeyihiin hanaanka shaqo ee jirka banii aadamka sida koriimada jirka difaaca jirka bogsiinta dhaawacyada iyo taranka iyo dhalmada inta ba balse su'aasha ayaa ah walaala yaal qaabka ugu haboon ee dadkeena soomaaliyeed uga faaideysan karaan wax tarka weyn ee vitamins yadu u leeyihiin nolosha banii aadamka iyo halista weyn ee dhinac taala oo ah haddii vitamins yada iyo macaadinta aan kor kaga soo hadalnay iyo guud ahaan ba vitamins yada iyo macaadinta jirka qofka ku bataan oo uu isticmaalo xadi aad u badan waxaa imaaneysa halis ka badan tii markii hore jirtay taas oo ilaa xad gaarsiin karta qofka banii aadamka geeri waxaa haboon mar kasta in dadkeena ay ku dadaalaan sidii ay caafimaad kooda u xaqiijin lahaayeen inta aysan imaanin xiliyada aan banii aadamka waxba loo qaban karin. xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa markasta u taagan daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah ba daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso: Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaad ka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof ka mida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 11:42 AM
Waa maxay xaalada lagu magacaabo (Semen Leakage) Semen leakage waa xaalad keenta in qofka shahwadiisa dareerto iska imaato iyadoo aysan jirin dareen ama kacsi jinsi oo buuxa macnaha qofka oo aan jirkiisa wax dareen galmo ah dareemeynin haddana shahwadiisii iska soo baxdo daadato. Sababta arrintaan keenta ayaa waxa ay ka dhalataa in dabac sanaan ama shaqo yari ku timaado neerfaha lagu magacaabo (Parasympathetic). Neerfahaan ayaa u xilsaaran in haniyaha biyo baxa uu xiro inta dareen ka kacsiga uu jiro si aysan shahwadu u soo dareerin ama dhaqsaba u imaanin laakin haddii neerfaha uu sidii laga rabay u shaqeyn waayo waxaa dabcayya haniyahii taa soo keeneysa in biyuhu soo baxaan isagoo qofka jirkiisa uusan laheyn wax dareen galmo ah. Wax yaabaha sababa cilladaani in ay ku dhacdo qofka waxaa kamida. 1: siigeysiga ama (siigada) 2: dhawac gaara neerfaha (Parasympathetic). 3: asbaabo cudur gaar ahaan cudurada wax yeeleeya neerfaha. 4:hoos u dhaca qaar kaimda vitamins yada jirka iyo macdanta jirka. 5: galmada faraha badan isla markaana joogtada ah. calaamadaha la isku arko ee cilladaan waxaa kamida. 1: kacsi la'aan 2:biyo baxa deg dega 3: dhabar xanuun 4: qooro xanuun Daaweyn ma leeyahay cudurkaan? Haa inshaa allaah daaweyn rasmi ayuu leeyahay cudurkaan bi idni llaah waxa uu kamid yahay cudurada xarumaha caafimaadka si buuxda loogu daaweeyo Si kastaba ha ahaatee xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa markasta u taagan daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah ahba daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso: Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaadka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof kamida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 12:38 PM
Asc wr wb ciid wanaagsan dhamaan maamulka dhaqaatiirta iyo howl wadeenada xarumaha caafimaadka iyo website yadooda waxaan salaan iyo hambalyo ku aadan munaasabada ciidu al adxaa u direynaa dhamaan ummadaha muslimiinta gaar ahaan ummada soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaana leenahay ciidan ciideeda allaha nagu gaarsiiyo caafimaad barwaaqo nabad gelyo iyo amni buuxa meel walbo oo dadka soomaaliyeed ku noolyihiin waxaan alle ka baryeynaa in uu noo islaaxiyo wadan keenii soomaaliya nabad iyo barwaaqana allaha nooga dhigo waxaan alle ka baryeynaa in uu siiyo caafimaad taam ah dhamaan muslimiinta gaar ahaan waxaan allaah ka baryeynaa in uu caafiyo dadkeena xanuun sanaya ee la il daran xanuunada iyo cudurada waxaan allaah uga baryeynaa dadka soomaalida ah ee xanuun sanaya in allaah cudurada ka dulqaado ugu bedelana caafimaad saxiix oo deg deg ah inshaa allaah waxaan alle ka baryeynaa in dadka muslimiinta ee xajiyay xajkoodii u aqbalo kuwa aan nasiibka u yeelana in allaah sanadka soo socda uu nasiib noogu daro waxaan allaah ka baryeynaa in uu dambigeena iyo kuwii waalidkeena ba dhaafo waxaan allaah ka baryeynaa in uu na siiyo cafi iyo caafimaad waxaan allaah ka baryeynaa in uu na siiyo naxariis tiisa dadka muslimiinta ee dhintay waxaan allaah uga baryeynaa in uu dambigooda dhaafo jannadiisa na uu na siiyo dhamaanteen waxaan allaah ka baryeynaa in daawooyinka iyo qalabka caafimaadka ee ay xarumahan caafimaadka dadkooda ku dabiibaan uu ka siiyo bukaanada xanuun sanaya caafimaad saliim ah oo waara waxaan allaah ka baryeynaa dadka guursaday muddo badana wada noolaa ee aan ubad kala helin in allaah ubad kheir qaba kala siiyo kuwa allaah uu ku irsaaqay ubadna uu kaga dhigo kuwo aduun iyo aakhiraba ay ku intifaacaan aamiin aamiin aamiin. naxariis iyo nabad gelyo korkiisa ha ahaato nabigeena muxammad (S.C.W) Allaha ka raali noqdo dhamaan asxaabtii rasuulka (SCW) taabiciintii iyo intii wanaaga ku raacday ilaa qiyaamaha aamiin. Walaala yaal waan idiin salaameynaa dadkeena soomaaliyeed dhamaantiin maamulka iyo dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka mar walbo inshaa allaah waa kuwo u taagan wax u qabadka dadkooda haddii ay ahaan laheyd xagga aqoonta iyo wacyi gelinta bulshada iyo xaggii daaweynta iyo dabiibka cudurada loo maaro waayay daaweyntooda iyo kala saaristooda intaba dadaalka xarumaha caafimaadka ee daaweynta rasmiga ee dhamaan cudurada guud iyo kuwa gaarka ahba isla markaana qof kasta oo soomaali ah lagu gaarsiinayo daawooyinka iyo qalabka caafimaadka ba halka uu kaga noolyahay dunida ayaa ah kuwo sii socon doona inshaa allaah. Walaala yaal xarumaha caafimaadka waxaa idiin kugu diyaarsan dhaqaatiir nooc kasta qalab casri ah iyo daaweyn rasmi ah sida aad hore uga barateeen walaalayaal xarumaha caafimaadka iyo website yadooda ayaa waxa ay yihiin kuwo u taagan in ay bulshada soomaaliyeed noqdaan kuwo ka bad qaba cudurada u jeedada loo aasaasay na 13 sano ka hor xarumahan caafimaadka ayaa waxa ay tahay ka badbaadi dadkaada cudur kana dhig bulsha daada bulsho qiimo leh in kastoo labadan qodob ee halku dhigga xarumaha caafimaadka ay yihiin kuwo allaah subxaanahu watacaalaa uu xaqiijin karo haddana walaaala yaal dadaalka ah in bulshadeena aan wax u qabanno ayaa ah mid laga gaarayo faaiido weyn oo miro dhal ah haddii aan tusaale u soo qaadano walaala yaal maqaalka ah biya baxa deg dega asbaabta ugu weyn ee sababta 80% ayaa waxa ay tahay waxa loo yaqaano (siigeysiga) oo ah biyaha shahwada ragga oo gacanta la isaga keeno markii maqaal kaas iyo asbaabta keeneysa iyo dhibaatooyinka ka dhashaan lagu daabacay website yada xarumaha caafimaadka waxaa falkaas foosha xun ee aan diin ahaan iyo caafimaad ahaan iyo waliba dhaqan ahaan ba aan ku wanaagsaneyn jooojiyay hakad geliyay dad soomaaliyeed oo gaaraya 380,000 oo u badan dhalin yaro markaa qaan gaar ah iyo kuwo ku jira da'da 40 kaba waxaa waxyeelada falkaas uu sababay oo ay dhibaato xagga caafimaadka jirka iyo xagga taranka ba uu ku keenay lagana daaweeyay dad soomaaliyeed oo gaaraya 530,000 oo qof oo iyaguna isugu jira dad waaweyn iyo kuwo dhalin yaro ah in kastoo tirada dambe ay jiraan asbaabo kale oo xagga taranka ah oo ziyaadiyay ayaa haddana falkaan foosha xun waxa uu ahaa mid bulshada soomaalida gaar ahaan da'yarta ku hayey dhibaatooyin xoog leh inshaa allaah haddii aad jeceshahay in aad wax badan ka sii ogaato dhibaatada falkaas laga dhaxlo guji page ka ( biya baxa deg degga). haddii aan nahay maamulka iyo dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka iyo website yadooda waxaan idiin leenahay ciid wanaagsan nabad iyo farxad ku ciida inshaa allaah waxaana ballan qaadeynaa inshaa allaah in xarumaha caafimaadka ay sii wadayaan dadaalkii daaweynta rasmiga ah ee ay bulshada soomaalida uga barteen sidoo kale haddii aad tahay qof xanuun sanaya ama xanuun kaaga uu yahay mid la aqoon san kari waayay ama dadaal daaweyn oo rasmi ah aad weysay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof kamida ehelkaada asxaabta la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daaweyn rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin. Maamulka xarumaha caafimaadka iyo website yada caafimaadka xafiiska nairobi kenya.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 1:39 AM
vitamins yada Qeybtii 2aad Maanta waxa aan ku soo qaadan doonaa inshaa allaah labada vitamins ee kala ah B1 - Thiamine iyo B2 - Riboflavin aan ku hormarno vitamin B1 Thiamine. Vitamin B1 (Thiamine). Waxaa uu ka mid yahay vitamins ka ku milma biyaha (water soluble vitamins) vitamin kaan haduu jirka qofka ku bato wax dhibaata ah uma keenayo. Intee laga helaa Vitamin B1 (Thiamine). Waxaa laka helaa vitamin B1 (Thiamine), Digirta, caanaha, ukunta qeybta jaalaha, qudaarta cagaaran, xuubka kore ee bariiska. qiyaasta uu u baahan yahay Qofka: 1.5 mg. - ragga. 1.1 mg - haweenka. Hadii uu jirka qofka uu waayo vitamin B1 Maxaa Dhacayo: Qofka hadii u waayo ama uu ku yaryahay vitamin B1 (Thiamine) waxa uu isku arkayaa calaamadahaan, 1: Daal badan, 2: cunto xumo (Loss of appetite), 3: lalabo, 4: wareer, 5: dhiig la'aan, Iyo dhibaatoyin kaloo badan oo ku dhaca wadnaha, murqaha oo daciif noqda, neefsiga oo qofka dhib ku noqota. isticmaalka alcohol ka ama khamriga waxa uu sababaa in uu yareyo Vitamin B1 qofka jirkiisa soo gali lahaa. Vitamin B2 RIBOFLAVIN. Sidoo kale vitamin B2 RIBOFLAVIN Waxaa uu ka mid yahay vitamins-yada ku milma biyaha (water soluble vitamins) Sidoo kalena hadii uu jirka qofka ku bato wax dhibaata ah uma keenayo, badanaa waxaa loo siticmaalaa ama lagu daaweeyaa dhiig la' aanta, finanka, isha oo biya gashato (cataract). qiyaasta uu u baahan yahay Qofka : 1.7 mg. - ragga. 1.3 mg - dumarka. 1.6 mg. haweenka uurka leh. Intee laga helaa Vitamin B2 RIBOFLAVIN: Waxaa laga helaa vitamin B2 RIBOFLAVIN Rootiga, burka, caanaha, beerka, ukunta, hilibka, qudaaarta cagaaran, kilida, malaayga, Fiiro gaar ah: Hadii lagu keydiyo cuntada vitamin kaan laga helo meel mugdi ah waxaa cunta daas ka lumaya vitamin kaan. Sidoo kale isticmaalka Alcohol ka ama khamrigu waxa uu sababaa in uu yareyo Vitamin B2 ga jirka uu heli lahaa. Hadii uu jirka uu waayo vitamin B2 Maxaa Dhacaya: Qofka hadii uu waayo ama uu ku yaryahay vitamin B2 RIBOFLAVIN waxa uu isku arkayaa calaamadahaan soo socda, 1: Maqaarka oo nabra ka soo baxaan, 2: carabka oo barara oona gaduudta, 3: indhaha oo gaduudta ama gubta. sidoo kale waxaa xusid mudan in dhamaan calaamadaha aan kor ku soo xusnay oo ay sababayaan yaraan shaha jirka ay ku yaryihiin labadan vitamins in sidoo kale ay sababi karaan xaalado kale ee caafimaad taas macnaheedu ma aha in qofka leh qaar kamida calaamadaha kor ku xusan ama qaar kamida in jirkiisa ay ku yaryihiin vitamins yada B1 iyo B2. Sida aad warbixinta kore aad ku soo aragteen labadan vitamins marka laga eego bulshada dhexdeeda qiyaasta ugu badan cidda u baahan ayaa waxa ay yihiin ragga iyagoo kaga baahi badan dumarka caruuurta iyo waliba dumarka uurka leh iyadoo ragga soomaaliyeed badan kooda ha ahaadeen culimo iyo caamaba aan maanta xilliga la joogo aan warba u heyn baahida ay u qabaan in jirkooda uu helo wax yaabaha uu u baahan yahay oo ay vitamins yadan labada ahina ka midka yihiin marka ma suura gal baa marba haddii raggii soomaaliyeed aysan warba ka heyn wax yaabaha jirkooda u baahan yahay in dumarka iyo caruurta ay ogaadaan baahida caafimaad ee jirkooda u qabo wax yaabo badan oo ay vitamins yadu ka mid yihiin Jawaabta waa maya. Si kastaba ha ahaatee xarumaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtooda ayaa markasta u taagan sidii ay bulshadooda uga haqab tiri lahaayeen guud ahaanba baahida caafimaad ee markaa heysata bulshada iyagoo markasta diyaar ula ah dadaalo isugu jira wacyi gelin cilmiyeynta bulshada xallinta iyo daaweynta cudurada guud iyo kuwa gaarka ah ahba daawooyin rasmi ah tayadoodana sareyso: Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya xanuun kaaga uu yahay mid in badan soo jiitamay isla markaana wali aadan u helin xal daaweyn oo rasmi ah ama ay jirto cillado xagga caafimaad ka oo kula darsay sida cilladaha xagga taranka guud ahaan ama ay jirto dhibaato kasta oo xagga caafimaadka kaa soo food saartay ama qofka xanuun sanaya uu yahay qof kamida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 9:25 AM
Waa maxay anovulation
macnaha (anovulation) waa haweenta oo aan ukxaminin ukxan sidaha haweenta oo soo saareynin wax ukxan ah haweenta oo weysa hanaan ka ukxan sidaha u soo saaro ukxan awood u leh in ay la fal gasho noola yaasha ku jira shahwada ragga. Ukxaminta oo ah in ukxan sidaha dumarku soo saaro ukxan isla markaana soo aado gudaha ilmo galeenka waa arrin lagama maarmaan u ah in haweentu uur yeelato taasi oo macnaheedu yahay in marna uusan uur imaaneynin mar haddii haweentu ay heysato dhibaatada anovulation ku (haweenta oo aan ukxamineynin). Haddii ukxaminta haweenta ay tahay mid aan toos aheyn tusaale Haddii haweentu xilli yada qaar si caadi ah u ukxamineyso xilli yada qaarna ay san ukxamineyn taasi waxaa loo yaqaanaa (oligovulation) Balse labada xaaladood ee anovulation iyo tan kale ee ah oligovulation kaba waxey kamid yihiin caqabadaha dumarka kaga yimaada dhanka ukxaminta iyo ukxan sidaha dumarka intaba waxaana ay ka wada tirsan yihiin xaalada loo yaqaano (ovulatory dysfunction). Ovulatory dysfunction waa xaaladda inta badan dumarka ku keenta dhalmo la'aanta xaaladdan ayaa sababta 40% dhalmo la aanta dumarka ku dhacda. Waa maxay calaamadaha lagu garto anovulation ama ovulatory dysfunction? Calaamadaha ugu soo horeeya ee lagu garto xaalada haan waxaa kamida. 1: qal qal ku dhaca caadada dumarka sida caadada oo badata ama yaraato ama soo daahdo ama soo deg degto ama xitaa la waayo inta badan dhibaatadan waxa ay dumarka isku arkayaan xilli kasto ee caado ma aha hal caado ama laba toona. 2: calaamada lagu garanayo xaaladahaan ee ugu weyn waa in gabadha oo aan wali gaarin xilliga dhalmo deyska oo gebi ahaan ba weyso dhiiga caadada muddo ka badan 2 bilood. 3: haddii wareega dhiiga caada daada uu ka yar yahay 21 maalmood ama uu ka badan yahay 36 maalmood waa labada caado dhex dooda ee taasi waxa ay cadeyn u tahay in aad qabto ovulatory dysfunction. 4: sidoo kale haddii wareega dhiigaaga caadada uu yahay mid is bed bedelayo tusaale haddii bishii hore wareega dhiiga caada daada uu ahaa 22 wareega bishaana uu ahaa 36 maalmood taasi waxa ay ka mid tahay calaamadaha lagu garto ovulatory dysfunction. Sidoo kale waxaa jiraan dumar kale oo iyagu si caadi ah u hela dhiiga caadada isla markaana wareega dhiiga caada doodana uu sax yahay wax khal khal ah iyo wax khalad ah aan lagu arkeynin dhinaca kalena qaba oo ay ku dhacday dhibaatada anovulation ama ovulatory dysfunction balse arrintaan ma aha mid inta badan dhacda waana arrin aad u yar dumarka wareegooda caadada iyo caada doodaba sax yahiin isla markaana aan ukxaminin wareegaas caado waxaa waxaa loo yaqaanaa anovulatory cycle . sidee labadan xaaladood ee anovulation iyo ovulatory dysfunction u sababaan dhalmo la'aanta dumarka?. 1: Hadii haweentu aanay sameyn ukxamin ma jirto fursad haween taasi uur ku yeelan karto waayo ma ba jirto ukun la fal gasha ukxanta nin keeda. 2: hadii se haweenta ay heyso dhibaato xagga ukxaminta ah oo xillina ukxamineyso ukun soo saareyso xillina ukxamineyn ukun soo saareyn jaaniska haweentaasi uur ku yeelan karto aad buu u yar yahay sababta na waa iyada oo aanan si joogta ah u ukxamineynin. 3: ukxanta ku daahday kiishka ukxan sidaha tusaale ukxan tii ay aheyd in laga soo saaro kiishka ukxansidaha 5 bilood ka hor haddii imika la soo saaro rajada laga qabo in ay ilmo noqoto aad ayey u yartahay haddii markaa aan lagu darin dadaal dhanka daaweynta ah. 4: sidoo kale waxaa muhiim ah in aad loo xusuus naado in dumarka qaba dhibaatooyin ka xagga ukxaminta dumarka oo aanan si joogta ah u ukxaminin in sidoo kale ay qabaan dhibaatooyin xagga hormons yada la xiriira dhibaatooyin kaas xagga hormoonada oo xitaa iyaguna keeni karo dhibaatooyin hor leh sida in dumarka ay waayaan oo uu ka zuulo dheecaan ka uu soo saaro makaanka afkiisa waa dheecaan ka noola yaasha ku jira shahwada ragga u soo xambaara gudaha makaanka dumarka si ay u bacrimiyaan ukxanta dumarka si uu u yimaado uur haweentu yeelato sidoo kale waxa ay sababaan in dumarka meesha ilmuhu ku beermaan ee endometrium ka loo yaqaano in ay jileec noqoto ama aad u adkaato taasi oo caqabad weyn ku noqoneysa in ukxantii bacrimisaneyd weyso meel ay ku abuuranto sidaas na uurkii uu noqdo mid soo halaaba oo aan hergalin. Asbaabaha lala xiriirinayo in ay dumarka qaarkood ku timaado dhibaatooyin ka anovulation ka iyo guud ahaan ba ovulatory dysfunction waxaa ka mida xaaladahan soo socda. 1: buurnida xad dhaafka ah (obesity) 2: culeyska jirka oo aad u hoseeya (too low body weight) 3: jimicsi aad u badan ama aad u daran haweenta oo sameysa jimicsi xad dhaaf ah. 4: keydka ukumaha haweenta oo aad u yaraado. 5: shaqo gabid iyo shaqo siyaadin ku timaada qanjirka thyroid ka loo yaqaano. 5: qofka oo ay la soo daristo xaalad aad u daran oo stress isku buuqid walaac iyo murugo fara badan. 6: balse xaalada ugu badan uguna caamsan isla markaana ugu weyn ee keenta anovulation iyo ovulatory dysfunction ayaa ah xaaladda loo yaqaano ukxan sidaha fiixda leh polycystic ovarian syndrome (PCOS). Si kastaba ha ahaatee umuurtan ayaa maanta waxa ay dumar badan oo dunida ku nool dumarka soomaaliyeed na ay ku jiraan kala kulmeen dhibaatooyin fara badan taas oo ay ugu weyn tahay iyagoo aad ugu rajo weynaa in ay helaan ubad kheir qaba marka xigana waxa kaloo ay la kulmaan xanuuno iyo cudurro markaa ka dhalanaya habsi u shaqeyn la aanta xubna hooda taranka iyadoo dhinaca kalena dhaqaatiirta ay ku cararaan ee xanuun kooda ay la door bidaan aanay ka helin rajjo fiican iyo in ugu yaraan xitaa xanuunada ay dareemayaan aysan inta badan ka caafimaadin. Intaa waxaa sii dheer iyagoo dhaqaatiirta kala kulmo dhibaatooyin iyo wax yeelooyin dhib badan u geytsa haweenta tusaale ahaan dumarka qaarkood ayaa marka ay dhaqaatiirta dumarka u tagaan ku sameeya qalliimo qalliima daas oo qaarkooda u geysta wax yeelo fara badan kuwo ayaa isla markiiba loo sheegaa in makaan kooda uu jirrooyin xun qabo isla markaana ay tahay in laga saaro sidaas na looga saaraa iyadoo markii horena dhaqtarkaas ugu tagtay inuu ka caawiyo caafimaad ahaan in ay ubad dhasho waxa ayna dhaqtarkii kala kulmeysaa arrintii ay u socotay cagsigeeda. Dumarka qaarkood ayaa dhaqaatiirta u sheegaan in keydka ukamaha ay heystaan aad u yar yihiin sidaa aawgeed na aysan haween taas u suura galeynin in ay si caadi ah wax iyada jirkeeda ka soo go ay u dhasho ayna tahay in ay doonato ukumo qof kale leeyahay oo iyadu ku dhal dhasho waxa loo yaqaano (egg donor) ama haweenta ukumo ka soo qaadato qof kamida ehel keeda sidaana ku dhal dhasho ama in haweenta lagu sameeyo waxa loo yaqaano (adoption) oo ah in ilmo qof kale leeyahay adiga uur kaaga lagu beero sidaana aad ku dhasho ilmo aan jismigaaga aheyn. Dhamaan labada xaaladood ee aan kor kaga soo hadalnay waa laba xaaladood oo leh daaweyn buuxda macnaha daaweyn buuxda waxaan ula jeednaa daaweyn rasmi ah oo bi idni llaah xubnaha taranka guud ahaan sidoo dii hore ku soo celineysa iyadoona haweenta aan lagu sameynin wax qalliin ah sidoo kale waxaan u cadeyneynaa dumarka qaba xaalada haan in xaala dahaan yihiin xaalado si fudud loo daaweyn karo oo aanay aheyn kuwo daaweyn tooda culus tahay balse waa xaalado looga bogsoonayo muddo ka yar 2 bilood taasi oo bi idni llaah sabab u noqon doonta in uurkana yimaado si deg deg ah inshaa allaah. Marka meel la isugu geeyo umuurahan ay la kulmaan dumarka ay ku adkaatay uureysiga isla markaana ay heysato dhibaatooyin la xiriira xagga taran ka guud ahaan haddii ay ahaan laheyd dhalmo la'aanta iyo haddii ay ahaan laheyd ba xanuunada markaa dumarka dareemaan xilliyada ay heysato mushkila dahaan ayaa waxa ay noqdeen kuwo dumarka markaa ay kala kulmaan khataro caafimaad iyo mid jinsiyeed intaba. Haddaba maadaama hooyada iyo ilmaha yihiin waxa ugu muhiimsan ee dunida maanta saaran isla markaana annaga soomaali ahaana mowduucaan si gaara inoo taabanayo maadaama dalkeenii muddo dheer dhibaato ka soo taagneyd maadaama dadkeenii uu kala firxaday maadaama dadkeena uu isaga badan yahay dad aqoonta caafimaad ka ku yartahay umuura haasi oo dhan waxa ay dumar keena ku keeneen in barnaamij kaan la xiriira taranka iyo dhibaatooyin kiisa ba naga wax yeeleeyo dumar badan qoysas fara badan iyo xitaa ragg fara badan ileyn barnaamij kaan xagga taranka waa mid aad u wajjiyo badan isla markaana ragg iyo dumarba wada saameeya haba lagu sii kala badnaado ee dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaad ka ayaa si wada jir ah iyagoo isku duuban arrimahan u istaagay alxamdu lillaah mahad dhamaan teed alle ayey u sugnaatay dadaalkii ay soo galeen dhaqaatiirta xarumaha caafimaad ka 12 kii sano ee dhamaaday dad gaaraya ilaa 350,000 oo qof ayaa alle ka siiyay dadaal isugu jira daaweyn waarta oo leh dhinacyo fara badan sida cudurro laga caafimaaday dadaal ubad raadineed iyo mid aqoon kororsi iyo dadaal la xiriira ka wacyi gelinta bulshada meelaha khatarada culus kaga imaan karto. Intii la soo waday dadaal kaasi dhamaan dhaqaatiirta iyo mil kiila yaasha xarumaha caafimaad ka waxa ay u hureen bulshadooda dadaal isugu jira hanti cilmi iyo juhdi lagu bixinayey sidii xal waara loogu heli lahaa mashaaki laad badan oo xagga caafimaad ka bulshada kuwaas oo ay ugu soo horeeyaan cudurro fara badan iyo xaalado fara badan oo markaa xal fiican hore loogu waayay dadaal kaas faraha badan ee juhdiga lagu bixiyay wuxuu maanta dad badan alle ka siiyay caawimaad iyo farxad in badan oo bulshada kamida in maanta danahoodii adduunyo dib ugu laabteen iyadoo hore u ahaa dad jooga quusasho farxaddii nolosha na ka dhamaatay waa alle mahadii dhaqaatiirta iyo maamulka xarumaha caafimaad ka ayaa inshaa allaah idiin xaqiijinaya dadaalkii aad uga barateen iyo ka sii badan mustaqbalka inshaa allaah. Haddaba haddii ay jiraan dhibaatooyin la xiriira guud ahaan ba caafimaad kaaga ama ay jirto dhibaato la xiriirta xagga taran kaaga ama aad isku aragtay mid kamida cudurrada iyo xaaladaha caafimaad darro ee lagu bayaaniyay website yada xarumaha caafimaad ka ama haddii ay jirto xaalad caafimaad darro ama mid jinsiyeed oo uu kaala hadlay dhaqtar kaaga ama ay xaala daasi ama cudur kaasi yahay mid muuqda oo adigaba aad garan karto ama mushkiladaha caafimaad darro iyo haddii ay jiraan ba caqabado caafimaad darro keentay sida dhalmo la aanta ama qofka cudurrada iyo xaaladaha caafimaad darida heysato uu yahay qof kamida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah oo la hubo wax tarkeeda inshaa allaah dhaqaatiirta waxa ay wax u soo barteen waa in ay ku caawiyaan daaweyn rasmi ah kuu sameeyaan waa in ay xal caafimaad u sameeyaan dhamaan xanuuna daada iyo mashaaki laad ka caafimaad ee ku heysta dhaqaatiirta shaqadooda waa in ay bulshadooda ka qabtaan ka bad baadiyaan cudurka cadowga ah ee markaa ku dheggan intii karaan kooda ah iyagoo la kaashanayo alle subxaanahu watacaa laa iyo aqoonta xagga caafimaad ka ee alle siiyay waa waajib in ay bulsha dooda u shaqeeyaan habeyn iyo maalin ba dhaqaatiirta xarumaha caafimaad ka waxa ay shaqeeyaan 18 saacadood oo xiriirta ah marka laga reebo xilliyada salaadaha mooyee intaasi waxa ku kallifaayo waa iyaga oo u shaqeeya dadka soomaaliyeed ee ku nool 5 ta qaaradood ee dunida haddaba adigoo heli kara dhaqaatiir soomaaliyeed adigoo wax kasta u sheegan karo adigoo kula hadlaayo luuqa daada hooyo adigoo dhaqaatiirta daawooyin ka iyo agab yada kale ee caafimaad ba kugu soo gaarsiinayaan halka aad dunida kaga nooshahay dhaqaatiirta oo markasta kuugu diyaar xarumaha caafimaad ka adigoo xilli kasta la soo xiriiri kara dhaqaatiirta iyo maamulka xarumaha caafimaad ka oo kuu suura geliyay dhamaan hababka is gaar siineed ee maanta dunida laga isticmaalo hadii aad ku seexato xanuun haddii aad faaiido laga yaabee in alle kuu sahlo aad ku weyso haddii fikir iyo walaac aad meel la joogto haddii naftaada iyo noloshaada aad gaarsiiso heer quusasho bal ka warrama maxaa umuur taas lagu tilmaami karaa? jawaabta inshaa allaah waxaan u deyneynaa bulshada soomaaliyeed. inshaa allaah dhamaan bulshada soomaaliyeed meel kasto oo ay joogaan xarumaha caafimaad ka iyo dhaqaatiirtooda ba waxa ay diyaar idiin la yihiin daaweyn rasmi oo la hubo daawooyin rasmi ah aqoon ta caafimaad ka talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta website yada caafimaad ka si aad u hesho xal caafimaad oo waara bi idni llaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 1:46 PM
MA OGTAHAY IN CUDURKA SONKOROWGA LOO HELAY DAAWEYN RASMI AH
Sonkorowgu waa cudur uu san jirku si haboon cuntada ugu isticmaali karin quwad ahaan macnaha haddii aad qabto cudurka sonkorowga cuntada aad cunto jirkaaga uma suurta galeyso in si haboon uu uga sameysto awood iyo tamar. Awooda iyo tamarta aad bey muhiim ugu tahay nolosha qofka haddii uu qofka waayo quwad ama tamar qofka waa uu dhimanayaa. Unug yada tirada badan ee
jirka ku jira waxay u baahan yihiin
shidaal ay ku noolaadaan oo ku koraan. Jirku wuxuu u jejebiyaa cuntada aad
cunto inta badan nooc quwad ah oo loo yaqaan sonkor (glucose). Glukoos waa
eray kale oo loo yaqaan sonkorta. Insuliin waa hormoon ku caawiya sonkorta inuu
ka wado dhiigga oo geeyo unugyada jirka.
Insuliin ka jirka waxaa sameeya beeryarta
(Pancreas). Ma jirto qof noolaan karta Insuliin la’aan. waxaa jirta dhowr nooc oo sonkorowgu u saameeyo dadka taasi oo ku xiran hormoon ka insuliin ee beeryarto soo saarto waxaana ka mida ah. 1: Beeryarta oo aan samaynin hormoon ka insuliin markaa qofka waxa uu lahaana yaa (Nooca 1 aad ee sonkorowga)
. 2: Beeryarta oo aan samaynin hormoon insuliin oo ku filan jirka, ama jirka oo aan isticmaali karin insuliin kii ay sameysay beeryarta markaa qofka waxa uu lahaana yaa (Nooca 2
aad ee sonkorowga). Sidee Buu qofka u Dareemi Doonaa Sonkorowga? Qof kasta si gooni ah ayuu u dareemaa sonkorowga oo dadku waa ku kala duwan yihiin calaamadaha. Qaar ka mid ah
calaamadaha digniinta ee sonkorowgu
waa: 1: Bogsasho soo daahda (tartiib)
. 2:Awood darro (awood la’aan ama hammiga jinsiga oo hoos u dhaca dareen la’aan) 2: Fursad miisaan (kordhid ama lumid)
3: Aragti caad leh
4: Kaadi tiro badan 5: Oon
6: Noog xad dhaaf ah ama daal fara badan. 7: Hurgun ama caabuq jirka ku dhaca iyo cun cun. dadka qaarkood ma oga in ay sonkorow
qabaan waayo ma qabaan calaamadaha digniinta. Sonkorowgu dhakhso ayuu u soo baxaa, isagoon digniin lahayn. Marar qaarkood si tartiib ah ayuu u soo baxaa, dhawr
bilood gudahood. Sidoo kale waxaa jiraan noocyo kale oo sonkorow ah waxaana kamida sonkorowga uurka oo ku dhaca dumarka qaarkood xilliga ay uurka leeyihiin noocan dambe ee sonkorowga waxa uu u badan yahay in uu iska tago marka haweentu dhasho kadib balse aad bey suura gal u tahay in sonkorowga xilliga uurka uu sii jiro isagoona markaa noqon kara nooca 2aad ee sonkorowga. cudurka sonkorowga ayaa isagu noqday mid waayadan dambe aad ugu soo bata bulsho weynta soomaaliyeed dhexdooda taasi oo sababtay in dad badan oo soomaali ah aad na u qiimo badan in cudur kaan uu sabab u noqday dhima shadooda qaar kale oo badana uu ka dhigay howl gab kuwo badana uuba naafeeyay. Haddaba dhaqaatiirta ka howl gasha xarumaha caafimaad ka iyo website yadooda ayaa markii xaqiiqda loo fiiriyo aad iyo aad isugu howlay maal iyo juhdi aad u fara badanna ku bixiyay bal sidii ay dadkooda soomaaliyeed marka hore ugu sharxi laahaayeen waxa uu yahay cudurka sonkorowga halka uu kaga dhaco jirka banii aadamka dhibaatada uu dareemayo qofka qaba cudurkaan noocyada uu u kala baxo ( eeg page ka cudurka sonkorowga ) Sidoo kale dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka intaa uga ma harin ee mar labaad iyo sedexaad ba waxa juhdi aad u weyn iyo hanti aad u fara badan ba ku bixiyeen sidii dadka soomaaliyeed ee la il daran cudurkaan loogu heli lahaa xal daaweyn oo rasmi isla markaana bi idni llaah qofka qaba cudurkaan si rasmi ah uga bogsoonayo balse waxaa nasiib darro aad u weyn noqotay in bulshada soomaaliyeed lagu program miyay in cudurkaan sonkorowga uu san laheyn wax daawo ah oo looga bogsoonayo taasi ayaa ugu dambeynta waxa ay sababtay in dadkeenii soomaaliyeed ee asal iyo farac ba muslimiin u soo ahaa in lagu mudo jirkooda hormoono iyo dheecaano laga soo qaaday doonfaar ( khinziir ) Subxaana llaah. haddaba waxaan ugu bishaareyneynaa dhamaan ummada soomaaliyeed meel kasto oo ay joogaan ba in dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaad ka alle ku guuleeyay daawooyin laga diyaariyay dhirta dabiiciga isla markaana muddo 14 beri ah jirka qofka ka saareysa cudurka sonkorowga bi idni llaahi al kariim. Marka adigoo heli kara daaweyn rasmi ah daawooyin xalaal dabiici aanan laheyn wax dhibaata ah oo haba yaraatee ay keenayaan adigoo heli dhaqaatiir soomaaliyeed oo aad af kaaga hooyo kula hadasho dhib kasta oo aad qabtana u sheegan kara adigoo heli kara allena ku siiyay hanti aad isku daaweyso adigoo heli kara daaweyn rasmi ah oo ku eg kaliya 2 bilood maxaa keenaya in laguugu mudo wax yaabo xaaraan ah maxaa keenaya in aad xanuun ku joogto maxaa keenaya in aad ahaato qof howl gab ah waa run alle ayaa keena jirrooyin ka iyo caafimaad ka intaba si uu u imtixaano addoomadiisa haddana dhinaca kale alle waa xakiim cilmigiisu badan yahay oo wuxuu inoo soo dajiyay daawooyin aan nafteena ku caawinno oo uu ugu horreeyo. 1: quraan ka kariim ka ah waa daawo waa lagu caafimaadayaa quraankii waa qowlkii alle inuu caafimaad hanuun iyo naxariis u yahay dadka rumeysan alle ayaa quraanka noogu sheegay markaa quraanka ha ugu horeeyo wax yaabaha aan nafteena ku daaweyneyno inshaa allaah ileyn waa daawo dhameystiran oo alle na siiyay alle ayaa mahad dhamaan teed u sugnaatay. 2: alle wuxuu na siiyay oo dhulka innooga soo saaray daawooyin fara badan oo ay dhirta dabiiciga ka mid tahay kuwaas oo laga helayo daaweynta cudurrada oo dhan ciddii alle baray un baana garan karta. Sidaa aawgeed dhamaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaad ka waxa ay diyaar u yihiin in ay dadkooda caawiyaan habeen iyo maalin ba iyagoo diyaar u la ah in ay dadkooda uga faaiideeyaan aqoon tooda caafimaad ka sidoo kale in markasta dadkooda u sameeyaan daaweyn rasmi ah daawooyin la hubo wax tar kooda talo iyo tusaaleyn caawimaad dhamaan waxa intaas iyo ka badan ba waxaa diyaar idiin la ah dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka iyo maamul kooda oo isku duuban. Haddaba walaal haddii dhaqaatiirta iyo maamul kooda u istaageen sidii ay u caawini lahaayeen dadkooda haddii ay dhaqaatiirta iyo maamul kaba ku bixiyeen juhdi isugu jiro naf iyo maal sidii dadka soomaaliyeed looga fujjin lahaa cudurrada xanuun ka iyo argagaxa naftooda geliyay haddii dhaqaatiirta iyo maamulka xarumaha caafimaad ka habeen iyo maalinba ay ku howlan yihiin sidii dadka soomaaliyeed looga samata bixin lahaa dhibaatooyin ka caafimaad darro ee dadkeena ku habsatay soo nasiib darro weyn ma aha in naftaada iyo ehel kaaga ba aad ku eegato cudur markaa halis ku ah nolosha banii aadamka? Haddaba haddii aad xanuun saneyso ama uu jiro cudur markaa ku haya isla markaana aad kala kulantay dhibaatooyin caafimaad darro ama xanuun ka iyo cudurka uu kaa hor istaagay in aad si xayyi ah u noolaato ama haddii xanuun kaaga cudurka ku hayaa uu yahay wax yeelooyin badan kuu geystay isla markaana xubno badan oo jirkaaga saameyn ku yeeshay ama uu kaa hor istaagay taranka iyo awooda jireed ee qofnimo isla markaana aadan weli xanuun kaaga u helin xal caafimaad oo rasmi ah iyo daaweyn soo afjarta dhibaatooyin ka xanuun ama cudur ee aad dareemeyso ama xanuun ka iyo cudurka uu hayyo qof kamida ehel kaaga ama asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 2:36 PM
MUHIIMAD INTEE LA EG AYEY NOO LEEYIHIIN CABITAAN KA BIYAHA
Biyuhu waxay ka kooban yihiin boqolkiiba 50 ilaa 70 miisaanka jirka qofka qaan gaarka ah. Haddii aanu qofku cabin biyo waxaa soo koobnaaneysa waqtiga uu noolaan karo. Biyuhu waxay gacan ka geystaan kobaca jirka. Waxay sidoo kale gacan ka geystaan hababka wasakhda looga saaro jirka, xaddiga kuleyka ee jirka . Biyuhu marka ay jirka ka baxaan, oo ay raacaan kaadida, saxarada iyo dhididka, waxaa qasab noqonaysa in biya haasi dib loo cusbooneysiiyo, qofka waxa uu markaas u baahanayaa in uu cabo sharaab, sida biyaha, shaaha iyo cabitaannada noocyada kala gedisan ah. Halkee buu jirku biyaha ka helaa? Jirku waxaa uu biyaha ka helaa saddex ilood: 1: waa cabitaan ka caadiga ah sida biyaha iyo cabitaannada kale ( shaaha, qaxwada iyo wixii la mid ah) 2: Waxaa kale oo uu jirka ka helaa biyaha cunnada caadiga ah ee la cuno siiba qudaarta ( xitaa cunnada sida rootiga waxay leedahay qeyb yar oo dareere ah). Inta badan dadka caafimaadka qaba ee qaan gaarka ah inta u dhaxeysa liitar iyo bar ilaa saddex liitar oo biyo ah ayey u baahan yihiin maalintii ba marka waa in qofku hiig sadaa inuu cabo ugu yaraan 8 galaas oo biyo ah maalin kasta. Intaas waxaa u dheer qofku in sidoo kale uu cabo cabitaannada kale sida shaaha iyo sharaabka kale ee la sameeyo. Dhibaatooyin ka caafimaad darro ee ka dhalan karta biyaha cabis tooda oo qofka uu ka gaabiyo aad iyo aad ayey u badan yihiin waxaana kamida. 1: tabar darro guud oo qofka ku timaado guud ahaan jirkiisa. 2: qofka oo ay la soo daristo dhibaato xagga dhaq dhaqaaqa caloosha qofka oo anan helin musqul. 3: qofka oo ay ku dhacaan cudurro kala dudwan oo ay ugu soo horeeyaan cudurrada ku dhaca kilyaha iyo kaadi mareen ka. Sidoo kale biyaha oo aanan si fiican loo qaadan isla markaana dadkeena soomaaliyeed aysan u fahmin in biyuhu yihiin muhiimada koowaad ee nolosha qofka banii aadam ka isla markaana aysan jirin wax yaabo kale ee qofka u buuxin kara kaalin tooda halista caafimaad darro ee ku imaan karta qofka waa 100% marka waxaa haboon in dad keena soomaaliyeed marka hore ay fahmaan muhiimada ay leedahay cabista biyaha si markaa qofka uu awood ugu yeesho inuu hagaajiyo guud ahaan caafimaad kiisa inta uu nool yahay ugu noolaado nolol xayyi ah oo caafimaad leh in badanna guul looga gaaro daaweynta cudurrdo badan ee dadkeena daashaday. Waxaan ka soo hadal nay noocyo badan oo biyo ah isla markaana qofka u noqonayo sharaab sida. 1: biyaha caadiga ah. 2: juice yada kala duduwan. 3: shaaha 4: qaxwada oo iskeeda ah iyada cudur meel fadhiya. 5: quddrada la cuno. 6: maraqa 7: cuntada qeybo kamida dhamaan Kuwani waa meelaha uu qofka ka helayo biyo uu jirkiisa u isticmaalo nidaamka qashin saarka jirkiisa ha noqdaan kuwo markaa ku filan ama kuwo markaa ku yar balse waxaan kor ku soo xusnay in ay aad u muhiim tahay in qofka uu cabo 8 galaas oo biyo ah maalin kii ugu yaraan haddii markaa aysan jirin dhibaato caafimaad oo u diideysa arrinta aad ka muhiim ka u ah ayaa waxa ay tahay biyaha qofka inuu cabo la doonayo waa kuwee waa noocee? Jawaabta ayaa ah biyaha qofka la doonayo in uu cabo waa biyaha cad ee nadiifka ah isla markaana la sifeeyay (purified drinking water) Sidoo kale waxaa iyaguna aad u wanaagsan oo la cabi karaa biyaha caadiga ah oo la kar kariyay ujeedada ayaa waxa ay tahay in aan dadkeena u sifeyno in biyaha ugu fiican xagga caafimaad ku yihiin biyaha caadiga ah ee nadiif ka ah qofka waa uu cabi karaa juice yada shaaha maraqa khudrada na wuu cuni karaa laakiin dhamaan kuwaasi ma aha kuwo ku filan baahidaada caafimaad ee biyaha. haddaba si aad u hesho caafimaad si aad uga hortagto cudurro badan si aad uga bogsooto xanuuno iyo cudurro badan si aad u hesho awood dheeraad ah jirkaagana u noqdo mid xoogan waa inaad imika ba ku dhaqaaq daan adiga iyo ehel kaagaba isticmaal ka biyo nadiif oo badan tallaabadan waxa ay naga caawineysaa dhamaan inaan helno xal caafimaad ee bulsho kaas oo noqonaya mustaqbal ka mid dhaxal gal ka ah inshaa allaah. ALLE WUXUU KU YIRI QUR'AAN KA KARIIM KA AH. WAXAAN KA YEELNAY BIYAHA NOLOSHA WAX KASTA sadaqa llaahu al cadiim. Hadda haddii aad tahay qof xanuun san xanuun kaagana uu yahay mid aad ku dhibtootay isla markaana aadan wali u helin xal caafimaad oo rasmi in badana aad tagtay goobo caafimaad in badana aad daawooyin qaadaneysay walina xal rasmi ah na aadan weli ka helin ama uu xanuun san yahay qof kamida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaari say daaweyn rasmi ah inshaa allaah hadda ba adigoo heli kara dhaqaatiir soomaali ah isla markaana aqoon durugsan u leh dhamaan cudurrada guud cudurrada Ku dhaaca baadin ka sidoo kale dhaqaatiir aqoon durugsan u leh cilmiga cunnada iyo daawooyin ka dadaal iyo hanti xoog leh na geliyay sidii ay dadkooda uga dul qaadi lahaayeen caafimaad darrada ku baahday bulshada meel kasto oo ay joogto maxaa keenaya in aad raali naftaada uga noqoto in aad xanuun ku seexeto in aad heysato cudur laga yaabo fadliga alle in maalmo yar looga caafimaado maxaa keenaya in aad weyso caawimaad adigoo dhaqaatiirta habeen iyo maalin u taagan yihiin in ay ku caawiyaan adiga iyo ehel kaaga. Haddaba la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daaweyn rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 2:47 PM
Waa maxay buro? Buro waa koriimo aan caadi aheyn oo ku timaada xubin kamida xubnaha jirka banii aadamka. Buro waxa ay timaadaa marka ay dhacdo isu dheeli tir la'aan xagga qeybsamida unnuga culimada qaar ayaa iyaguna aamin san in buradu tahay calaamad infection ama caabuq weyn sababna ay u tahay difaaca jirka oo hoos u dhac uu ku yimaado. Waxaa jiraan darsano burooyin ah oo kala nooc ah magac yada burooyin ka leeyihiina inta badan waxaa loogu magac daraa halka ay ka soo dhashaan xubin ka ay ka soo dhashaan ayaa loogu magac daraa tusaale ahaan (burooyin ka dhuunta Ama makaanka). Buro waa wax adag oo uruursan kana duwan burooyin ka fiixda loo yaqaano. Buro waxa loo qeybiyaa laba nooc oo kala ah. 1: benign iyo 2: malignant. Macnaha burooyin ka benign ka loo yaqaano waa burada ku eg halka ay ka soo baxday isla markaana aanan ku fideynin xubnaha kale ee u dhow wax yeelana ku beereynin balse waxa ay lahaan kartaa koriimo intii ay doonto macnaha meesheeda ayey ku kori kartaa kuna badan kartaa oo hal xubin kaliya ilaa 8 buro ayaa ka soo wada bixi kara kuna kori kara balse badanaa burooyin ka benign ka loo yaqaano ayaa si tartiib tartiib ah u kora intooda badanna burooyin ka noocan ah ma keenaan dhibaato weyn daaweyn rasmi ahna waa leeyihiin bi idnillaah. Malignant iyaduna waxaa loo yaqaanaa burooyin ka ku fida jirka taasi oo la macno ah noocyada burooyin ka malignant waxa ay ku fidaa xubno aan aheyn xubintii ay ka soo baxday sidaana waxa ay ku wax yeeleysaa xubno badan oo jirka banii aadamka kamida burooyin ka malignant waxaa loo yaqaanaa burooyin ka kansareysan. Nooc yada burooyin ka. Breast fibroadenoma. Fibroadenomas waxey kamid tahay burooyin ka benign ka waxa ayna ka soo baxdaa kuna kortaa naasaha buradan marka gacanta lagu taabto waxa aad dareemeysaa adeeg wareegsan dhaq dhaqaaq ayeyna sameysaa waxaana la rumeysan yahay in saameyn ay ku leeyahay imaatin keeda hormoon ka estrogen ka sababta oo ah badanaa burada noocan ah waxa ay ka soo baxdaa dumarka uurka leh iyo dumarka gelaya waqtiga dhalmo deyska kuwaas oo jirkooda uu soo saaro xaddi badan oo ah hormoonka estrogen ka iyo sidoo kale dumarka qaadanaya daawooyin ka HRT ga (hormone replacement therapy). Waxaana qatar ugu jira in buradan ay ka soo baxdo dumarka ku jira da'da u dhaxeysa 30 ka sano ilaa 35 sano. Baaritaan ka ultrasound ka loo yaqaano ayaa wuxuu dhaqaatiirta ka caawinayaa in la kala sooco burada fibroadenoma iyo bararada kale ee naasaha dumarka ku dhaca. Dhaqaatiirta ayaa u adeegsada buradan qalliin oo kaliya mararka qaarna faraha ayey ka qaadaan balse dhaqaatiirta website kan iyo xarumahooda caafimaad ka ayaa alle ku guuleeyay daaweyn rasmi oo buradan loo qaadanayo muddo 2 bilood ah inshaa allaah. Fibroids: Fibroids iyaduna waxa ay kamid tahay nooc yada burooyin ka benign ka loo yaqaano waxaana kamid ah 1: hard fibroids. 2: soft fibroids 3: keloid fibroids. Waxa ayna ka soo baxdaa dhuunta iyo meelo kaleba. Uterine fibroids Uterine fibroida ama myomas waxa ay kamid tahay iyaduna nooc yada burooyin ka benign ka loo yaqaano taas oo ka soo baxda isla markaana ku korta derbiyada makaanka. ilaa imika lama garanayo asbaabta rasmiga ah ee sababta burada noocani balse culimada caafimaad ka ayaa isku raacsan in ay sababto buradaan sare u kaca ku yimaada hormoonka estrogen myomas kuma dhacdo dumarka ilaa ay ka qaan gaaraan waana burada ugu badan ee dumarka makaanka kaga dhacdo marka laga reebo fiixyada ka soo baxa makaanka. Calaamadaha waxaa kamida 1: dhiiga caadada oo muddo badan iska socda 7 maalmood iyo ka badan. 2: dhiig aad u badan oo yimaada inta u dhaxeysa caadooyin dumarka dhexdooda. 3: xanuun caloosha hoose ah. 4: qabsin caloosha ah caloosha oo aan qofka soconin. Noocyada burooyin ka ma aha kuwo aan halkaan ku soo wada koobi karno balse waxaan inshaa allaah uga hadli doonaa qeyb qeyb si markaa dadkeena soomaaliyeed u ogaadeen waxa ay yihiin burooyin ka nooc yadooda iyo dhibaatooyin ka ay ku keenaan banii aadamka iyo daaweyntooda dhamaan inshaa allaah. Maanta waxaan inshaa allaah ku soo qaadaneynaa mowduuceena burada loo yaqaano myoma. Myoma waa buro adag waxaana ay ku bilaabataa muruq jilicsan oo si aad ah ugu kora gudaha ilma galeenka waxa ayna kamid tahay burooyin ka aan xumeyn macnaha kuwa aan isu beddelin cudurka kansarka waxaana badanaa loogu yeeraa (fibroid tumor). Myoma waxa ay leedahay noocyo dhowr ah waana ay ku kala duwan tahay xagga size ka iyo tirada intaba waxaana badan noocyada yar yar kuwaas oo inta badan aan laheyn calaamado qofka dhib ku keena sida xanuun oo kale nooc yada yar yarka ah ee burada myoma isla markaana laheyn sababeyn xanuun iyo dhibaato uma baahna daaweyn 25% kii buro ee myoma ayaa sababta xanuuno una baahan in la daaweeyo. burada myoma ayaa waxa ay u kortaa laba qaab oo kala ah. 1: qaab myoma hal unug le ah taas oo macnaheedu yahay in nooca buradani u korto qaab hal buro ah. 2: qaabka labaad waa nooc u korta dhowr buro myoma ah oo meel kaliya ka soo wada baxaan isla markaana iyagoo fara badan hal meel ka soo wada baxa isla markaana sameeya koriin wada jir ah waxa ayna cabir ahaan gaartaa burada myoma inta u dhaxeysa 1 mm ilaa 20 cm diameter. Myoma waa burada ugu badan ee Lagu sameeyo baaritaano aad u fara badan sababtoo ah waa burada ugu badan ee dumarka ku keenta in makaanka ama ilmo galeenka dumarka laga saaro. In kastoo myoma tahay buro haddana ma aha noocyada burooyin ka kansareed. Sababta rasmiga ee keenta in dumarka ka soo dhashaan burooyin kaan myoma ilaa immika si rasmi ah looma yaqaan balse burooyin kaan ayaa dumarka waxa ay ka soo dhashaan xilliga dumarka ay ku jiraan dhalmada oo aysan wali dhalmo deyska noqon waa inta u dhaxeysa 25 sano ilaa 50 sano. burada myoma kama soo baxdo dumarka aan qaan gaarin sababta ayaana ah myoma waxa ay dumarka ku dhacdaa xilliga dumarka jirkooda uu bilaabo in uu soo saaro hormoon ka loo yaqaano estrogen. Myomas waxa ay aad u kortaa xilliga dumarka ay leeyihiin uur sababta ayaana ah jirka dumarka uurka leh oo xilligaasi soo saaraya hormoon ka estrogen oo tira badan. Mar haddii haweenku gaaraan xilliga dhalmo deyska isla markaana caadadii ka joogsato burada myomas guud ahaan waxa ay joojineysaa koriimada sababtoo ah xilligaas dumarka jirkooda waxa uu joojinayaa soo saaristii hormoonka estrogen ka taas oo ku keeneysa in buradaasi hoos u dhac ku yimaado suura gal na ka dhigi karta in ay baaba'do ama dhamaato. dhaqaatiirta chemicals wax ku daaweysa waxa ay u adeeg sadaan Daaweynta buradaan qalliin qalliin kaas oo dumarka looga saaro ilmo galeen ka taas oo dumarka ku keenta ma dhaleysnimo joogta ah. Dhamaan dadkeena soomaaliyeed waxaan ugu bishaareyneynaa in dhaqaatiirta iyo xaruma hooda caafimaad ka idiin diyaariyeen daaweyn rasmi ah oo ku aadan dhamaan nooc yada burooyin ka Haddaba haddii aad leedahay mid kamida nooc yada burooyin ka isla markaana dhaqaatiirtu kuu sheegeen in xubin kamida jirkaaga ka soo baxday buro xal daaweyn oo rasmi ahna aadan wali u helin aad na dareemeyso xanuun iyo dhibaatooyin ay kuu keeneen burooyin kaas ama burooyin kaasi sababeen in uu hakad ku yimaado tarankii ama burooyin kaasi lagu sheegay qof kamida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan iyo xaruma hooda caafimaad ka dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn la hubo oo rasmi ah inshaa allaah dhaqaatiirta ayaa bi idni llaah kaaga daaweyn doonta nooc kasto oo buro ah muddo 2 bilood ah inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daaweyn rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 3:12 AM
Assalaamu caleykum waraxma tullaahi wabara kaatuh haddi aynu nahay maamulka dhaqaatiirta iyo howl wadeena xarumaha caafimaadka takhasusiga iyo website yadooda waxa aan halkaan ka salaameynaa munaasabada ciidul fidriga dhamaan ummada soomaaliyeed gaar ahaan macaamiisha sharafta leh akhrista yaasha iyo guud ahaan ba ummada soomaaliyeed waxaana alle ka baryeynaa inuu naga aqbalo soomkii bisha ramadaan ee noo dhamaaday ilaahay kheir keeda iyo fadligeeda ha ina siiyo camaladii wanaagsanaana allaha noo aqbalo ciid wanaagsan ayaan leenahay dhamaan ummada soomaaliyeed ciidan ciideeda allaha nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo inta xanuun san waxaan alle uga baryeynaa in uu siiyo caafimaad deg deg ah kuwa caafimaad qabana allaha u ziyaadiyo dalkeeniina allaha noo xasiliyo abaaraha iyo dhibaatada allaha naga dulqaado inshaa allaah dhamaan ummada soomaaliyeed waxaan leenahay ciid wanaagsan.
Inshaa allaah bi idni llaah al kariim xarumaha caafimaad ka iyo website yadooda intaba waxa ay sii dar dar gelin doonaan wax ka qabadkii baahida caafimaad ee bulshada soomaaliyeed ee horaan looga bartay hadii ay ahaan laheyd daaweynta bulshada meel kasta oo ay soomaali ku nooshahay iyo haddii ay ahaan laheyd xagga aqoon kororsiga oo bulshada laga soo dhiso xagga aqoonta caafimaad ka bulshada iyo iyadoo xarumaha caafimaad ka sii xoojin doonaan daryeelka caafimaadka bulshada haddaba haddii alle ka raali noqdo sidii aad hore uga barateen xarumaha caafimaadka takhasusiga waxaa diyaar idiin kugu ah dhaqaatiir khibrad iyo aqoon u leh xanuunada ay daaweynayaan isla markaana isku howlay sidii bulshada ay u heli laheyd macluumaadyo ku saabsan caafimaadka iyo daaweyn intaba marka walaala yaal waad salaaman tihiin ciid wanaagsan ciidan ciideeda allaha nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo inshaa allaah mahad sanidiin.
Qeybaha kala duduwan ee manaafacaad ka dhirta faaiidada iyo saameynta ay ku leedahay noola yaasha dhulka cimilada iyo deegaan ka intaba
Noolaha waxa uu u qeyb samaa labo
qeybood oo waaweyn oo kala ah dhirta (Plants) iyo xayawaan ka (Animals). Waxaa kale oo jira fungi ama caari caaryada ku sameysanta markii cunto meel la dhigo sida cake ga oo kale, fungi gu waa wax aan xayawaan kana ka mid aheyn dhirtana ka mid aheyn oo keli good gaar u taagan, wuxuuna u eg
yahay sida caariyada cuntooyin ka meel la dhigo ku dhalata.
Cunto haddii meel la dhigo waxaa dusha kaga sameysma caaryo. caaryadaasi waa fungi.
Fungiga waxa uu sababaa cuduro badan oo dadka iyo xoolaha ba ku dhaca tusaale ahaan cambaarta pneumonia yada iyo suuska oo kale.
Fungi gu waxa uu rabo inuu cuno wuu nuugaa taasina xayawaanada kale ee jira ayuu kaga duwan yahay. Dhirtana wuxuu kaga duwan yahay
fungigu ma laha kaloorofiil oo ileyska
qoraxda ugama faaiidaysan karo sida ay dhirtu uga faaiidaysato. Kaloorofiil ku waa qeybta dhirta u sameysa midabka cagaaran ee ay leedahay sida caleemaha dhirta.
Qiyaastii fungigu waa ilaa 72.000 oo
nooc iyo in ka sii badan. Waxaan wada ognahay marka laga hadlaayo noola yaasha in ay jiraan qaar badan oo ilmo aragto ah (weyneyso kaliya lagu arko).
Inta badan noolaha (dhirta ah boqolkiiba 95% wuxuu ka sameysan yahay, afar shey oo kala ah Carbon, Hydrogen, Oxygen, iyo Nitrogen. Oksajiintu waa neefta labaad ee ugu
badan hawada inagu xeeran, waxa ayna sameysaa 21% gibilka hawada ah ee innagu xeeran. Oksajiintu waa neefta kaliya ee taageerta gubashada walxaha, mana jiro
dab baxaya neefta oksajiin la'aanteed, sidoo kale oksajiintu waa neefta taageerta nolosha noolayaasha ku nool adduunka guudkiis.
Neefaha wahsada ama qaniga ah "noble or inert gases" sida Argon, Helium. Neefaha hawada wasakheeya sida kaarboon mono ogsaaydh, Haydarajiin
Salfaaydh iyo neefo badan oo kale. Dhirtu waxa ay ka mid yihiin noola yaasha dhirta waxa loo qeybin karaa kuwa bixiya ubax iyo kuwa aan bixin uba .
Dhirtu waxa ay leedahay ubaxyo u
Ubax yada dhirtuna waxa ay leeyihiin qaybo lab (male flower parts) iyo qaybo
dhaddig (female flower parts). Geedka uu ubaxiisu leeyahay qayb lab iyo qayb dhaddig labadaba waxaa lagu kala magacaa baa (bisexual plant) ama(haermophradite).
Qaybta lab ee dhirta waxa loo yaqaanaa (Stamen) waxeyna ka kooban tahay faxalka (Pollen) iyo Miiqa (Anther) oo sare u haya faxalka.
Qeybta dhaddig ee dhirtana waxaa loo yaqaanaa (Carpels) ama (Pistil),
waxa ayna ka kooban tahay fur ubbo (stigma), dhuun ubbo( style), iyo ubbo ubax (ovary), oo uu beedku ku jiro.
Dhirtu waa aas aaska nolosha dhir
la'aani waa nolol la'aan.
Dadkii aan dhirtoodda xajisan, waxaa hubaal ah in ay dhakhso ugu noolaan donaan deegaan aan xajin doonin dad, xoolo iyo xasharaad toona.
Faa'iidooyinka dhirtu u leedahay nolosha lama soo koobi karo, tusaale ahaan ma jirto cid aan si toos ah ama si dadban aan ugu tiirsanayn dhirta xitaa noolaha ilma aragtada ah sida bacteria yada, fungas ka
Waxa jira xiriiro u dhexeeya kheyraad ka nool ee degaanka, iyo degeneyaa shiisa ba oo ay ka mid ka yihiin dadka, xayawaanka, geedaha, kaluunka, shimbiraha, noole yaasha
aan la arki Karin, biyaha, iyo carada. Dhirtu kolka ay dheef-samaysiga ku jirto, waxa ay siideysaa hawada loo yaqaan Oxygen (O2) ee dadku qaato,
la'aanteed na aanu noolaan karin Waxey iyadana (dhirtu) dib u qaada taa neefta dadku sii daayo ee loo yaqaan Carbon dioxide (CO2).
Sidaasi darteed, dhirta iyadana la'aanteen ma aysan jirteen.
Sida ay dhirtu cunada u sameysato
waxaa laga dhaxlay sameynta Borotiin lagu quudiyo xoolaha nool, iyadoo la adeegsa naayo hab kiimiko ah oo la mid ah kan ay dhirtu cuna deedu ku sameysato.
Sidaas awgeed waxaa dhirtu caalamka u aqoon saday in ay tahay warshada cunnada adduunka.
Cunto samaysigu waa habka noole
cuntada u samaysto. Noola yaashu laba hab mid kood ayey cuntada u samaystaan
1: habka kali samaysasho
2: iyo mid ku tiirsani.
Cuntada la samaystaa waa wax yaabaha nooluhu u baahanyahay sida fitamiino, borotiino, kaar bohaydrate, baruur, biyo iwm. Hadaan dib u jaleecno noocyada
samaysiga cuntada dhirtu waxa ay cuntadeeda ka sameysataa biyo (H2o), oksajiin (oxygen) iyo hawada
kaarboon dhaayoksaydh (Co2), iyada oo kaashaneysa tamarta cadceeda
Dhirtu waa isha koowaad ee laga helo tamarta amase qeybiyaha guud ee tamarta.
Qaybaha cunatada ee jirkeenu u baahan yahay waxaa ka mid ah
borootiinka (proteins), baruurta (fats), fitamiinada (vitamins), macdanta (minearls), iyo waxyaabo kale oo soo raaca. Kuwaas oo dhamaantood laga maarmaan ah, si looga helo tamarta, ama quwadda aynu ku socono iyo koritaanka qofku korayo.
Seddexda ugu horeeya waxaa loo
yaqaanaa nafaqo (nutrients)
Halka qaybaha kale ee vitamiinada,
macaadinta, iyo biyaha, iyaguna jirka u leeyihiin muhiimad weyn, waxeyna jirka qofka ka caawiyaan inuu si habsami leh u shaqeeyo. Haydariij-kaarboon(Hydrocarbon) Waa isku dhafka curiya yaasha kala ah carbon (C) iyo Hydrogen (H), Ku waas oo ah curiya yaasha ubucda u ah sameysan ka saliida ceyriin iyo gaaska dabiiciga ah oo ah kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira dhulka hoostiisa. Isku dhafka laba daas curiye waxaa looga qiyaas qaataa tayada iyo baaxada inta
shiidaal ama gaas ah ee dhulka hoostiisa ku jirta.
Carbohydrates ku waa waxyaabaha
jirkeennu ka helo kulka iyo tamarta aynu ku soconeyno.
Qaybtani waxa ay ka kooban tahay laba qeybood oo kala ah sonkor iyo starch una sii kala baxa (Simple and Complex). Qaybta Sonkorta (Simple) waxa laga helaa khudrada, keegga iyo cuntooyinka mac macaan waxey na si dhakhso ah jirka u siiyaan tamar iyo kulayl. Waxaa kale oo kamid ah group kan
pastries - chocolate - honey and jams - jellies - brown and white cane sugar - pizzas - prepared foods and sauces - soft drinks - sweets and snack bars.
bananas - barley - beans - brown rice - chickpeas - lentils - nuts - oats - parsnips - potatoes - root vegetables - sweet corn - wholegrain cereals - wholemeal breads - wholemeal cereals - wholemeal flour - wholemeal pasta - yams.
Waxayna jirka siiyaan tamarta uu
waqtiga, dheer u baahan yahay kuna sii shaqeeyo ee keenta inaan hore loo baahan ama gaajoon. Marka jirku dheefshiido cuntada
kaarbohydrate ka ah waxa loo kala
jejebiyaa, qaybo yar yar sonkor fudud sida glucose ta taas oo jirkeenu u isticmaalo shidaal si uu tamar ama quwad u helo.
Qaar ka mid ah sonkor taas wuxuu jirku ku keydiyaa beerka ama ba waxaa loo bedelaa baruur taas oo lagu keydiyo maqaarka qofka (skin). Protein-ku wuxuu u sameysan yahay
sidii silsilad taxane ah (polymer),
polymer waa erey giriig ah macni hiisuna yahay "Poly" wax badan (many) iyo "mer" oo ah shey kaliya (unit)
Waxayna ka sameys maan monomers, "mono" waa hal kaliye., sida monomers (Amino Acid). Borotiin kiiba wuxuu ka kooban yahay, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen iyo waliba sida qaalibka ah sulfur (CHONS).
Protein-ku waxa aynu oran karnaa waa aasaaska Jirka waxaana looga baahdaa meel kasta oo unug ka dhalanayo ama ka dhambal mayo ha noqoto muruqyada neerfa yaasha iwm. Waa gaadiidka xambaara ogsegiinta gaarsiiyana qeybaha kala duwan ee Jirka. Waxa ay Jirka u keydiyaan Macdanta Birta (fe). Waxa ay suurta galiyaan dhaq-dhaqaaqa Muruqyada. Waxa ay xooji yaan dhamaan xubnaha
kala jiidma sida:
Tendons, muruqyada (muscles),
mergiyada, maqaarka, timaha, cidiyaha
Waxey ka loo Xooji yaan difaaca Jirka.
Lipids waa saliida iyo subagga sidoo kale waa silsilad taxane ah (polymer) oo laga sameeyo (monomers) inta badan sida caadiga monormer ka noocan waa
triglycerides Lipids. Carbohaydarayt kiiba waxaa uu ka kooban yahay carbon, hydrogen, iyo oxygen (CHO). Lipid baruurta (Fats) baruurtu waxa
looga baahan yahay si jirku u helo
tamar iyo diirimaad ama kulayl si jirku ugu shaqeeyo isu dheeli tirnaan.
Baruuraha aan la isticmaalin waxa lagu keydiyaa qaybo badan oo jirka ka mid ah sida maqaarka hoostiisa(skin).
Baruurtu waa laba qeybood oo kala ah tan laga helo hilibka xoolaha ama waxa xoolaha ka soo baxa sida subagga ( hilibka iyo caana haba) iyo hilibka baruurta leh taas oo loo yaqaan baruurta buuxda (saturated fats) Waxaana ku badan waxa loo yaqaan cholestaroolka.
Nooca labaad na waa tan aan buuxin
(unsaturatedfats) waxaana laga helaa wixii aan xoolaha ka imaan sida khudradda iyo waxyaabaha beeraha ka soo baxa sida saliidda cuntada iyo wax yaabaha lamid ka ah.
Cunitaan ka baruurta badan ee ah nooca buuxa iyo cholestrool ku waxa ay keenaan wadno xanuun ka. Fitamiinadu waxay aad muhiim ugu
yihiin jirka, waxa ayna ka qeyb qaataan falgalo badan oo ka dhaca jirka taasi oo fududeysa in uu dheef shiidku si fiican u shaqeeyo. Fitamiinada waxa loo qeybi yaa laba
qeybood oo kala ah.
1: qeyb ku milanta dufanka
2: iyo qeyb ku milanta biyaha.
Kuwa ku milma dufanka waxey kala
yihiin A, D, E iyo K, fiitamiina dani si uu jirku u qaato waa in ay cuntada aad cunaysaa ku jirtaa dufan. Fiitamiinadani waa lagu sumoobaa hadii ay jirku ku bataan sababtoo ah waxa ay ku keyd samaan oo ku ururaan jirka, jirkuna iskama soo saari karo.
Fiitamiinadani waxa laga helaa
cuntooyinka ay ka mid yihiin. saliidda, khudaarta wax lagu karsado,
iyo beedka intiisa huruuda ah. Fiitamiinada ku milma biyaha waxay
kala yihiin 8 nooc oo B fitamiino la yiraahdo (B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotin iyo Folic
acid) iyo fitamiin C.
Fiitamiinadani jirku wuu iska saari
karaa oo waxa ay soo raacaan kaadida hadii ay ku bataan jirka sidaas darteed laguma sumoobo kuwan.
cuntooyinka ay ka mid yihiin. khudaarta sideeda loo cuno
iyo khudaarta wax lagu karsado, hilibka iyo caanaha.
Dhirta roobkana waa laga jirsadaa,
qorraxda waa laga harsadaa, Miraha
iyo caleen toodana dad iyo duun yaba waa
la cunaa oo waa lagu noolyahay.
Wax tarka dhirtu innoo leedahay ma'aha
waxaan halkan ku soo koobi karno waxaa
ka loo ka mid ah. Qoryaha guryaha lagu dhiso, gaadiid ka,
doonyaha iyo kuwa laga dhisaba dhirta ayaa laga soo jaraa.
Alaabta guryaha iyo qalabka xafiisyada
sida, Kuraasta, miisaska, iyo sariiraha na
waa laga qoraa. Waraaaqaha wax lagu qoro iyo kuwa aan
wax lagu qorin ba dhirtaa laga sameeyaa. Weel ka wixii qabo ah dhirta ayaa laga
sameeyaa, wixii qoriyana iyadaa laga
Waxaa kaloo dhirtu ay saameyn weyn ku
yeelataa jawiga, cimilada iyo guud ahaan
deegaan ka wax tar gaar ah na wey u
Meel ba meesha ay ka dhir badan tahay wey
ka roob badan tahay oo dhirta roobka waa ay soo jiitaan. Biyahana dhulka ayey u qabtaan, dhul
aan biyo lahayn, dhir iyo baad toona
kama baxo, oo waa lama degaan, dad iyo
duunyana cidi kuma noolaan karto.
Dhirtu waxay u sii cimri dheereysaa
reyska, ama qoyaan ka (moisture).
Had iyo jeer caleemaha dhirtu waxa ay
hawada ku sii dayaan qoyaan uumi ah
(evaporation) kadibna uumi baxaas
joogtada ah waxaa u qabooji yaa
dhammaan hawada ku xeeran dhulka
Geedaha ku yaal dhulka iyo biya dhaca
buuraha waxa ay joojiyaan cara guurka
Manaafa caad ka dhirtu u leedahay guud ahaan noola yaasha gaar ahaan dadka dhulka jawiga ma aha mid lagu soo koobi karo qoraal iyo wax lamida toona manaafa caad ka dhirtu u leedahay dadka ka sokow cuntooyin iyo qalab ka laga hagaajiyo dhirta waxaa ahmiyada ugu weyn ee manaafacaad ka dhirta kamida in qeybo aad u badan ama inta badan dhirta dadka faaiido caafimaad u leedahay iyadoona la wada ogyahay in dhirtu tahay hooyada daawooyin ka ee ay dabiibka u isticmaalaan dadka iyo duunyada ku nool dunida guud keeda sidoo kalena waxaa la wada ogsoon yahay in daawooyin ka dhirtu yihiin xalka kaliya ee rasmiga ah ee loo hayo daaweynta cudurada dhamaan.
Haddaba haddii aad tahay qof xanuun sanaya isla markaana uu ku hayo xanuun ama dhakhaatiirtu kuu sheegeen in uu jiro cudur markaa kuu keenaya xanuun ka iyo cilladaha kula soo darsay ama adiguba aad ogtahay xanuun kaaga iyo dhibaatooyin ka uu kuu keenay ama cudurka iyo cillada ku heysata laguugu yiri xal looma hayo ama in badan aad ku daashay daawooyin qalliin iyo wixii lamida ama qofka xanuunka iyo cudurka uu hayo yahay qof kamida ehel kaaga asxaab taada la soo xiriir dhaqaatiirta ka howl gasha website kan dhaqaatiirta ayaa kuu diyaarisay daaweyn rasmi ah dabagal iyo hubin dheer oo lagu sameeyo xanuun kaaga iyo halka uu salka ku hayo waxa sababaya dhamaan inshaa allaah la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho daawo rasmi ah talo iyo tusaaleyn caawimaad inshaa allaah mahad sanidiin.
Posted by DARYEEL CAAFIMAAD Waqtiga 12:26 PM